YEYINTNGE(CANADA): Thursday, September 18
မေ့မရတဲ့ စက်တင်ဘာ သွေးစက်များ
စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈
စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ၂၆ ရက်။ အဲသည်နေ့က ဖုန်းတခုဝင်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ သူပုန်တပ် ၀င်စီးသလို ၀င်စီးခံရတယ် ညက တုတ်တွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကိုရိုက်တယ်။ ရှိရှိသမျှ လူတွေကို ဒူးတုတ်ထိုင်ခိုင်း၊ ကြိုးတုပ်၊ မော့ကြည့်ရင်ရိုက်၊ ဘုန်းကြီးတွေ ဆရာတော်ကြီးတွေမရှောင် ဆွဲတယ် ရိုက်တယ်။ တညလုံး အုံးမောင်းခေါက်သံတွေ ကြားရတယ်။
ပြောတဲ့သူရဲ့အသံတွေ တုန်နေတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆိုတာ ဒီလို ၀င်လုပ်ရဲတဲ့မြေမှ မဟုတ်တာ …။ မယုံဘူး။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ အဖြစ်မှန်တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမြေ ဆိုတာ ဖိနပ်တောင်ချွတ်ပြီး ၀င်ရတဲ့မြေ။ အဲသည်လို ဘာလို့ လုပ်ရဲတာလဲ ဆိုတာ မတွေးဝံ့ပါဘူး။
ဘုန်းကြီးကျောင်းကသူတွေအားလုံး အေးအေးဆေးဆေး ဖမ်းရင်တောင် အားလုံးက ခေါင်းငုံ့ အဖမ်းခံမယ့်သူတွေပါ။ သို့ပေမယ့် သူတို့လုပ်ရဲတယ်။ အငြိုးတကြီးနဲ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ … “၈ ၈ ၈ ၈” နောက်ပိုင်းမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အဖြစ် လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဘုန်းကြီးတွေကနေ စပြီး နောက်ပိုင်းမှာ လူထုက ပါဝင် လာခဲ့တာ။
ဘုန်းကြီးကိုတော့ မလုပ်ကောင်းပါဘူး လို့ တွေးခဲ့ကြတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေက အလယ်ကနေပြီး ရပ်တည်ပေးမယ် ဆိုရင် ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ တွက်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီစစ်အစိုးရက အာဏာကို လက်လွှတ်ရတော့မှာကို ကြောက်ရွံ့စိတ်ကြီးမားစွာနဲ့ လက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်ခဲ့တယ်လေ။ ဒါကို ရင်နာနာနဲ့ပဲ ပြောရတော့မယ်။
ဘာလဲ ကမ္ဘာက သိသွားသတဲ့လား … နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားတဲ့လား။
မြန်မာပြည်သားတွေ အယုံအကြည် မရှိတော့ဘူး။ ၈ ၈ ၈ ၈ ထဲက အဖြူ အမည်း သဲကွဲခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို အနှစ် ၂၀ ကြာပြီးတဲ့တိုင် ဒီအတိုင်း ကြည့်နေခဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒါကိုမြင်တယ် လို့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းပဲ ဆိုလိုက်တော့မယ်။
အခုဆို တဖြေးဖြေးနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အားကျနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ပေါ်လာပြီ။ အချိန်ဆွဲတာတို့၊ ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကို သူတို့ အကြပ်အတည်း ရောက်လာရင် တစ်ယောက်လောက် ဟန်ပြ လွှတ်ပြလိုက်တာတို့၊ ဓားစာခံလုပ်ဖို့ သူတို့ဖမ်းထားသူတွေထဲက အရေးမပါတဲ့သူတွေကို လွှတ်ပြလိုက်တော့ တကယ် လွတ်ရမယ့် ဦးဝင်းတင်တို့က နောက် ရောက် ရောက်သွားရော။
ကိုကိုကြီးတို့မင်းကိုနိုင်တို့ဆို … သူတို့ အကျဉ်းထဲ အကြပ်ထဲ ရောက်ရင် လွှတ်ဖို့ ထား ထား တာ။
ကိုကိုကြီး ကိုယ်တိုင်တောင် ၀န်ခံ ပြောသွားဖူးပါရဲ့။
“ကျနော်တို့က ဓားစာခံတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပြီဗျာ … ”တဲ့။
ဒီ စစ်အစိုးရ လုပ်ရပ်တွေ ရိုးနေပြီလို့ ဆိုချင်ပေမယ့် စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်တွေကို လေ့လာ စောင့်ကြည့်ပြီး ကမ္ဘာက အားကျနေကြပြီ။ သူတုိ့လည်း လိုက် လုပ်ချင်နေကြပြီ။
ဘာလဲ ဂန်ဘာရီ။ ဘာလဲ ပီညဲရိုး ။ ဘာလဲ ကုလသမဂ္ဂ။ ဘာလဲ အီးယူ ။ ဘာလဲ ယူအက်စ်။
မယုံပါဘူး။ အလကား …
သူတို့ တကယ်ပဲ မြန်မာပြည်သားတွေအပေါ် မေတ္တာရှိရင် မကြာပါဘူး။ အဖြေ တခုတော့ ထုတ်ပြီး လောက်ပြီ။ အခုလည်း မဒမ် ဘွတ်ရ်ှက နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်တွေနဲ့သွားတွေ့သလေး ဘာလေး လုပ်ပြ နေပြန်ပြီ။
တွေ့မှာပေါ့… မြားဦးက သူတို့ဘက် လှည့်လာပြီကိုး။ နည်းနည်း ဟန်ပြတော့ လုပ်ပြမှာပေါ့။ ပြီးရင် တရုတ် အိုလံပစ်ပွဲကို ဆက်သွားပြီး ချီမြှင့်အုံးမှာ ဆိုတော့ …။ ဒီက မြန်မာတွေခင်မျာ သာဓုသာ နာနာ ခေါ်ပြီး ကျန်ရစ်ရတာပေါ့။ ဒီက လူတွေမှာတော့ … လေသံ မိုးသံတွေ နားစွင့်ပြီး ၀မ်းသာရမှာလား၊ ၀မ်းနည်းရမှာလားတောင် မသိတတ်တော့ပါ။
ကဲ ဘယ်လိုမျိုး ခရီးဆက်ကြရမှာလဲ။ ဘယ်သူမှလည်း အားကိုးလို့ မရမှတော့ မရမယ့်အားလည်း ကိုးကွယ်ပြမနေတော့ပါဘူးနော်။ စစ်အစိုးရရဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်ထဲမှာ ဘယ်လို နေမှာလဲ။ ဘယ်လို အသက်ရှင်မှာလဲ။ ဘယ်လို ခရီးကိုရောက်အောင် ချီတက်ကြမှာလဲ။
သူတို့ကြောင့် အသက်တိုအောင် မနေနဲ့တဲ့။ သူတို့ကြောင့် အသက်ရှည်အောင်နေ … တဲ့။ မိတ်ဆွေ တဦးက မှာတယ်။ အဲသည်လို သစ္စာမဖောက်တဲ့ အမှန်တရားကိုသာ ဖက်တွယ်တဲ့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများနဲ့သာ ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပါတော့မယ်။ သူတို့အရေး ကိုယ့်အရေးကို ညီညွတ်ချစ်ခင်စွာနဲ့သာ ရိုင်းပင်းပါတော့မယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ထောင်ထဲက သူရဲကောင်းများကို လေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့တဲ့ ရဟန်းတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ မိသားစု အာဇာနည်တွေကို အလေးဂရုပြုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ငါတို့ရဲ့ ဘ၀နဲ့ လူမှုဝန်းကျင်ကို သူတို့နဲ့သာ တည်ဆောက် ရှင်သန်ပါတော့မယ်။
ကလေး သူငယ်များကို မကောင်းမှုကို မလုပ်ဖို့၊ အားမကျမိဖို့ ငါတို့ ပြောပြမယ်။ သူတို့ အမှန်တရားအတွက် ရပ်တည်ရဲလို့ ထိခိုက်နာကျင် ပြိုလဲတဲ့အခါတိုင်းမှာ ငါတို့တတွေ သူတို့ရှေ့က ကာကွယ်တားဆီးရဲတဲ့ သတ္တိ မရှိခဲ့ရင်တောင် သူတို့ကို ငါတို့ ထွေးပိုက်ကြင်နာမှု မေတ္တာကို ပြကြမယ်။
စစ်ဘီလူးတွေ ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ အိမ်ယာတွေ၊ မိသားစုတွေ၊ ဘ၀တွေ၊ အသက်လိပ်ပြာတွေ အားလုံးဟာ ငါတို့ရဲ့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း မိတ်စစ်ဆွေစစ်တွေရဲ့ အရာအားလုံးအဖြစ် သဘောထားပြီး သူတို့တွေကို တစစီ ပြန်ကောက်လို့ သူတို့တွေနဲ့ ငါတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်ထူထောင်ကြမယ်။
ငါတို့တတွေ မင်းတို့ကြောင့်တော့ အသက်တိုအောင် မနေပါဘူး။ အသက်ရှည်အောင် နေကြမယ်။
အမှန်တရားကို ချစ်တဲ့ မိတ်ဆွေစစ်များကိုသာ ရွေးချယ်ပေါင်းသင်းခြင်းနဲ့ …။
စစ်တပ်အလိုတော်ရိတွေနဲ့ သူရဲဘောကြောင်သူတွေအတွက် ငါ့မှာ အချိန်ပေးစရာ မရှိပါ။
ငါတို့က လူ့ဘ၀မှာ တခါပဲ ရှင်သန်ခွင့်ရတယ်။ ငါတို့ တခါပဲ သေမယ်။ ခဏ ခဏတော့ မသေဘူး။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/18/20080အကြံပြုခြင်း
5 murder case happened at University Avenue, Rangoon,
Hi Nyi Lay Ye Yint,
I am giving youanews from my reliable sources in S'pore. Hope you remember the murder case happened at University Avenue, Rangoon, in last March 2008. The murderers are hired gunmen,6Thais & 1 Wa, by Kyaing Than Shwe, son of General Than Shwe. The motive of the murder was the dead family borrowed their diamonds to TS's daughter at her wedding, the dead family asked Daw Kyaing Kyaing (wife of TS) to return the diamonds, since DKK and her daughters are greedy & crooks, they didn't return the diamonds foralong time. So, the dead family repeatedly asked to return by calling DKK, and DKK & the dead family hadabig argument on the phone. Then, DKK got very angry and plotted this murder, the son KTS took TS's personal pistol and hired gunmen to kill the whole family, but luckily son-in-law escaped. Now, the murders and the plotters are known in Rangoon and whole Burma, and even to the whole world. Home Affairs Minister General Maung Oo and Police Chief Khin Yee are scared to investigate further, but they have given their investigative report to General Maung Aye and to some foreign embassies in Rangoon together with video tapes. Please check about this news from your sources and spread to all Burmese and whole world.
Cheers, S Maung
ရန်ကုန်တွင် ဒေါ်စုနှင့် အာဏာပိုင်တို့ ဆွေးနွေးမည်ဟု သတင်းပြန့်၊
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
ယနေ့ ဂျာနယ်များတွင် (မြန်မာတိုင်းနှင့် ဘိုင်ဝိကလီး) တွင် မျက်နှာဖုံးနှင့် အချပ်ပိုများဖြင့် ဒေါ်စုနှင့် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ စက်တင်ဘာ ၁၉ နောက်ပိုင်း တွေ့ကြမည်ဟု သတင်းလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ကနဦးက စက်တင်ဘာ ၁၅ တွင် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ဒေါ်စု ကျန်းမာရေးကြောင့် ရက်ရွှေ့ခဲ့ရကြောင်း၊ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကတဆင့် ဒေါ်စုက ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ရန်ကုန်မြို့နေ လူထုက နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကြီးတွင် တစုံတရ ပြေလည်မည်လားဟု မျှော်လင့်နေကြသော်လည်း အစိုးရက လုံခြုံရေးကို ယခင်ကထက် တိုးမြှင့်လာသဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများက ပိုပြီး တိုးပွားလာနေသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်ပက အတိုက်အခံ သတင်းဝက်ဆိုက်ကြီးများ ယမန်နေ့က အင်တာနက်တိုက်ခိုက်မှု ခံရချိန်တွင် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အချို့အင်တာနက်လိုင်းများ ရန်ကုန်တွင် ပြတ်တောက်နေခဲ့သည်။ အချို့က စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့သည် ၂၀၀၇ သံဃာသပိတ်မှောက် တပ်လှန့်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဖြစ်၍ဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်။
ယမန်နေ့ည ၁၀ နာရီကတည်းက ရန်ကုန်မြို့ထဲသို့ ၀င်ရောက်သည့် ခရီးသည်တင်ကားများကို လုံထိမ်းများ၊ ရဲများက တင်းကြပ်စွာ အသေးစိတ် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ စစ်ဆေးရေး ချက်ပွိုင့်များတွင် အရပ်ဝတ်များနှင့် မီးသတ်ဝတ်များအပါအ၀င် ဦးရေ ၅၀ ကျော်ရှိသည်။ ကမ္ဘာအေး ကုက္ကိုင်း မှတ်တိုင်၊ မြောက်ဥက္ကလာက ဆူးလေဖက် အ၀င် ကားမှတ်တိုင်များ၊ န၀ဒေး မှတ်တိုင်တို့တွင် အထူးတင်းကြပ်သည်။ သွပ်ဆူးကြိုးများ အထပ်ထပ်ချပြီး ပိတ်ဆို့ စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်သည် ဟု မျက်မြင်များက ပြောသည်။
ညအိပ်ညနေ အလုပ်သမားများကို မိသားစုများက အလုပ်မသွားရန် တားမြစ်နေကြကြောင်း၊ မိဘများ ဇနီး ခင်ပွန်း သားသမီးများက မိသားစုဝင်များ အိမ်မပြန်၊ ရုံးမရောက်ဘဲ လမ်းမှာ ပျောက်ဆုံးမည်ကို အထူး စိုးရိမ်နေကြရကြောင်း၊ ရပ်ကွက်တွင်း ဧည့်စာရင်း စစ်ဆေးရာတွင် ရပ်ကွက်တွင်း မမြင်ဘူးသည့် တစိမ်း အရပ်ဝတ်များ၊ ယူနီဖောင်းဝတ်များက အိမ်အတွင်း ၀င်ရောက် ကျုးကျော်စစ်ဆေးနေခြင်းကို ခေါင်းငုံ ခံနေရကြောင်း၊ ဝေသာလီပြည် ဘီလူးဝင်စီးသလိုမျိုးလား ဟု ထင်မြင်မိကြောင်း သတင်းပို့သူတို့က ပြောသည်။ သည်တခေါက် ရွတ်ရမည့် ပရိတ်မှာ မေတ္တာသုတ်မဟုတ် ရတနာ့သုတ်ဟု ထင်ကြောင်း အချင်းချင်း လက်တို့နေကြသည်ဟု ဆိုသည်။
တိုင်းရင်းသား မိသားစုအိုးအိမ်များ၊ ရပ်ကွက်များကိုလည်း အထူး ပစ်မှတ်ထား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများအတွက် ကရင်အမျိုးသား မိသားစုများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်း၊ သံဃာနှင့် လူထုအုံကြွမှုများအတွက် အသံထွက်နေသည့် ရခိုင်အမျိုးသား မိသားစုများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နေသည်ဟု လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်သူ လူငယ်အဖွဲ့က မိုးမခကို ပြောကြားခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ လူငယ်များ၊ ပြည်သူလူထု အစုအဝေးများကလည်း ရဲများ လုံထိမ်းများ အနီးတွင် ၀ိုင်းဝန်း စောင့်ကြည့်နေခြင်း၊ တစုံတရာ အဓိကရုန်းဖြစ်လာပါက တခုခု လှုပ်ရှားမည့် အရိပ်အယောင်များနှင့် တုန့်ပြန်ခြင်းတို့ကို တွေ့နေရသဖြင့် စစ်အာဏာပိုင်များ ဖြစ်စေချင်သလို လူထုက ငြိမ်နေမည့် ပုံစံတော့မရှိဟု မျက်မြင်တချို့ က မိုးမခသို့ သုံးသပ်ပြသည်။
အကိုအမ များ သူငယ်ချင်းများခင်ဗျား
ဒီလင့်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြပါနဲ့ခင်ဗျာ။အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ e-mail account နဲ့ login မလုပ်မဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
it technician ညီလေးတယောက်သတိပေးတာပါ။ဒီလင့်ကိုသုံးမိရင် ကိုယ်မသိပဲကိုယ့်ရဲ့ password ကိုခိုးယူပြီး အခြားသူတွေဆီကိုမေးလ်တွေအလိုလိုပို့တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းခိုးယူတတ်ပါတယ်။
စုံစမ်းလို့ရသလောက်ဆိုရင် နအဖ ဘက်က အစီစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
http://gtalkbomber.mail2customer.com !! Dangerous site... who know they steal your password and get mail from inbox.. to look for something that government wants...
Be careful.....Don't open this link..http://www.arachesostufodue.blogspot.com/..(This link is hacking yours email or blog password by Rusian's dogs .
ဧရာဝတီ စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
ကိုသက် စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
ယနေ့သည် သံဃာတော်များ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ခြင်း တနှစ်ပြည့်မြောက်သောနေ့ဖြစ်သည့်အလျှောက် အာဏာပိုင်တို့က ရန်ကုန်နှင့် မြို့ကြီးများတွင် လုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားပြီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများနှင့် သံဃာများကို စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်ဟု ဒေသခံများက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ ၂၀၀၇ ခု ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်း သံဃာတော်များ ချီတက်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
အစာရေစာရှားပါးမှုကြောင့် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ မီဇိုရမ်သို့ အများအပြား ရောက်ရှိ
ကိုထွေး စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရသော အစာရေစာရှားပါးသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ချင်းလူမျိုးတို့သည် ဇာတိမြေကို စွန့်ခွာပြီး အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်၍ အလုပ်အကိုင်များ ရှာဖွေ နေကြကြောင်း သိရသည်။
ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ဗစ်တာ ဗိုက် လီယန်က“နေ့စဉ်လိုလို ချင်းလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေဟာ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေဖို့ အတွက် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မီဇိုရမ်ကို ရောက်လာကြပါတယ်၊ အခုဆိုရင် အလုပ်လာရှာတာ ခန့်မှန်းခြေ လူ၂၀၀၀လောက် ရှိသွားပါပြီ၊ နောက်လည်း ချင်းလူမျိုးအတော်များများက ထပ်ပြီးရောက်လာဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီ သို့ပြောသည်။
ယခင် သီတင်းပတ်က အဆိုပါပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရွာ ၁၅ ရွာမှ ရွာလူကြီှး များသည် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်ကာ နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီကို တောင်းခံခဲ့ကြောင်းနှင့် အစာရေစာပြတ်လပ်မှုကြောင့် ကလေးသူငယ် ၁၅ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
“ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရွာ ၁၅ရွာကလူကြီးတွေဟာ နိုင်ငံတကာက အလှူရှင်တွေကို သူတို့ဒေသမှာ လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ အစာရေစာရှားပါးတဲ့ ပြဿနာနဲ့ အခြေအနေတွေကို တင်ပြခဲ့ပြီးတော့ အကူအညီတွေပေးဖို့ တောင်းခံခဲ့ပါတယ်၊ အခုချိန်အထိ ရွာသားအတော်များများဟာ ဘာအကူအညီမှ မရသေးဘူး”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် အစာရေစာရှားပါးသည့် ပြဿနာမှာ တနေ့တခြား ပိုမိုဆိုးဝါးလာနေသော်လည်း အာဏာပိုင်များက တစုံတရာတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိသည့်အပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် မြန်မာလူမျိုး များက ချင်းလူမျိုးများကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်နေသော အကူအညီများကိုလည်း တားမြစ်ထားကြောင်း ချင်းတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ပြောကြားသည်။
“လက်ရှိအခြေအနေက အရင်ကထက် ပိုဆိုးလာတယ်၊ အာဏာပိုင်တွေက ဘာတခုမှ အကူအညီမပေးဘူး၊ သူတို့ပြောတော့ ကျေးရွာတွေမှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာတွေကို သတင်းပို့ပါ၊ သတင်းပို့တော့လည်း သက်ဆိုင်ရာ တွေက အထက်ကို တင်ပြတာပဲရှိတယ်၊ ဘာမှမလုပ်ပေးဘူး၊ာရွာက လူကြီးတွေနဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း တွေက ကိုယ့်ရွာအခက်အခဲကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ဖြေရှင်းနေတယ်၊ မဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ၊ အစိုးရကနေ ဖြေရှင်းပေးတာတော့ မရှိသေးဘူး၊ အချိန်ကြာလေလေ ပိုဆိုးလာ လေလေပဲ”ဟု ဟားခါးမှ အစိုးရ၀န်ထမ်း တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မီဇိုရမ် အခြေစိုက် ချင်းတိုင်းရင်းသားများ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (Chin Famine Emergency Relief Committee)က ချင်းပြည်နယ်ရှိ လူဦးရေ ငါးသိန်းရှိသည့် အနက် တသိန်းခန့်မှာ အစာရေစာရှားပါးသည့် ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး အဆိုပါပြဿနာမှာ ၂၀၀၇ ခု ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် လူအများစုမှာ ဆန်ပြုတ်၊ သစ်သီးသစ်ဥနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စားသောက်၍ အသက်ဆက်နေရကြောင်း ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော လပိုင်းက ချင်းပြည်နယ်၌် လူအများစိုက်ပျိုးထားသော စိုက်ခင်းအတွင်းရှိ သီးနှံများကို ကြွက်များဝင်ရောက်စားသောက် ဖျက်ဆီးခဲ့ရာမှ စတင်ကာ အဆိုပါအစာရေစာ ရှားပါးသည့် ပြဿနာ စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြွက်နှိမ်နှင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေးရွာရှိရွာလူကြီးများနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများက ကိုယ့်အစီအစဉ်ဖြင့် ကြွက်သတ်ဆေးများ၊ ထောင်ချောက်များ ၀ယ်ယူ၍ရွာမှ စိုက်ပျိူးရေးလုပ်ကိုင်သူများကို ပြန်လည်ဖြန့်ချိပေးခဲ့သဖြင့် အခြေအနေမှာ အနည်းငယ်ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာခဲ့သော်လည်း ယခုလက်ရှိ အနေထားမှာ ပိုမိုဆိုးဝါးလာကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါငတ်မွတ် ခေါင်းပါးသည့် ကပ်ဘေးဒဏ်သည် ချင်းပြည်နယ်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅၀ ခန့်က တကြိမ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ၀ါးအပွင့်များကို စားသုံး၍ကြွက်များ ပိုမိုမျိုးပွားလာကာ ဆန်စပါးစိုက်ခင်းများနှင့် သီးနှံစိုက်ခင်းများကိုဝင်ရောက် ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၀ါးပေါသည့် နေရာဒေသများတွင် အဆိုပါပြဿနာမှာ ပိုမိုဆိုးဝါးကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်ကြသည်။
ထိုကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဆန်စပါးသုတေသန အဖွဲ့ကြီးကလည်း ချင်းပြည်နယ်၏ အစာရေစာရှားပါးသည့် ပြဿနာမှာ ပို၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားထားသည်။
အန္တရာယ်ရှိ တရုတ်နို့မှုန့်များအကြောင်း စစ်အစိုးရ ရှင်းလင်းစွာ သတိပေးခြင်းမရှိ
အေးချမ်းမြေ့ စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
မြန်မာစစ်အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် နိုင်ငံတကာသတင်း ကဏ္ဍ၌ ၎င်းနို့မှုန့် သတင်းကို ဖော်ပြထားသော်လည်း မြန်မာပြည်သို့ တင်သွင်းနေကြောင်း ဖော်ပြခြင်း မရှိပေ။
“ပြောရရင် ဒါနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာမူဝါဒမှ ချိုးဖောက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ထိမ်ချန်လုိ့ ဘာအကျိုးစီးပွား ရမှာလည်း။ ပြည်သူကို အသိပေးသင့်တဲ့ကိစ္စ သေချာပြောသင့်တယ်” ဟု ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း လူငယ်တဦးကပြောသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာထုတ် သည်နယူးလိုက်အော့ဖ် မြန်မာ သတင်းစာတွင်မူ နို့မှုန့်များကို တင်သွင်းသည့် နိုင်ငံများ စာရင်း၌ မြန်မာပြည် ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“သတင်းစာက စုစုပေါင်းမှ မြန်မာလို ၂ စောင် အင်္ဂလိပ်လိုတစောင်ရှိတာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စဆို လုံးဝ မဖော်ပြလို့မဖြစ်မှ တစောင်လောက်မှာပဲ ခပ်ဝါးဝါးအဲလို ဖော်ပြနေကျ” ဟု ၎င်း လူငယ်ကဆက်ပြောသည်။
မြန်မာပြည်တွင် လူအများစုမှာ တရုတ်ပြည်မှ တင်သွင်းနေသော နို့မှုန့်များကိုသာ အားကိုးနေရသည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးက သုံးသပ်သည်။
“နို့မှုန့်တံဆိပ်တွေက အများကြီးပဲ။ အားလုံးက တရုတ်ကသွင်းတာချည်းပဲ။ အများစုက ဘယ်တံဆိပ်ရယ် ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဈေးသက်သာတာ ဝယ်သုံးနေကြတာ” ဟု သူကပြောသည်။
၎င်း အန္တရာယ်ရှိနို့မှုန့်များ စားသုံးမှုကြောင့် ကလေး ၃ ဦး သေဆုံးကာ ၁၅၈ ဦး ကျောက်ကပ် ဝေဒနာ အပြင်းအထန် ခံစားနေရသည်ဟု တရုတ်ပြည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးချန်ဇူးက မနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်သည်။ ထိုကြေညာချက်တွင် ကလေး ၆ ထောင်ကျော်မှာ ထိုနို့မှုန့်များကြောင့် နာမကျန်းဖြစ်လျှက် ရှိသည်ဟု ပါဝင်သည်။
“တကယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ တရုတ်ကတောင် ကြေညာနေပြီဆိုရင် မြန်မာသတင်းစာတွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြား တွေ၊ ဂျာနယ်တွေကနေ သေသေချာချာ ဖော်ပြပေးသင့်တယ်။ အဲလို ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်လည်း သတင်းစာနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းမှာထက် လူဖတ်များတဲ့ ဂျာနယ်တွေနဲ့ လူကြည့်များတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ကြားဖြတ်ပြီး ကြေညာပေးသင့်တယ်။ သတင်းစာက ဘယ်သူမှ မဖတ်ဘူး။ ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းကလည်း ဘယ်သူမှကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေ” ဟု ရန်ကုန်မြို့နေ ကလေးဖခင် တဦးကပြောသည်။
မြန်မာပြည်ရှိ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်များတွင်မူ ၎င်းသတင်းကို နိုင်ငံတကာသတင်း အနေနှင့် ဖော်ပြ မည်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာပြည်နှင့် ပတ်သက်နေသည့် ကိစ္စရပ်ကိုမူ ဖော်ပြခွင့်ရ မရ မသိသေးဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းသမား တဦးကပြောသည်။
ရိက္ခာရှားပါး ရောဂါတိုးပွား ချင်းရွာသားများ
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 18 2008 23:40 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အိုက်ဇော။ ။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ကြွက်များ သောင်းကျန်းမှုကြောင့် ယာခင်းများရှိ သီးနှံပင်များ ပျက်စီးခဲ့ပြီး စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးမှု တွေ့ကြုံနေခဲ့ရာ ထန်တလန်မြို့နယ် ကျေးရွာစုစုပေါင်း ၅ ရွာတွင် ရွာသားများ ဝမ်းရောဂါ နှင့် အရေပြားရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေသည်၊၊
ထန်တလန် မြို့နယ်အတွင်းရှိ လုံကျွေးသဲ၊ လုံကျွေးပီး၊ ငဖိုင်ပီး၊ ငလိုင်နှင့် လိုင်လမ်း ကျေးရွာများတွင် တရွာလျှင် လူဦးရေ ၃ဝ မှ ၅ဝ ခန့်၊ ကလေးသူငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ဝမ်းရောဂါနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အနာများ ပေါက်သည့် ဝေဒနာများ ခံစားနေရသည်။
ကျနော်တို့ရွာမှာ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက် ဖြစ်နေတာ အတော်များတယ်။ အနာစိမ်းပေါက်တဲ့ သူတွေလည်း တော်တော်များတယ်။ ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ လူကြီးတွေမှာ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက် ဖြစ်တာများတယ်" ဟု လုံကျွေးသဲ ကျေးရွာ မှ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး လုပ်သားတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ငဖိုင်ပီးရွာမှ တောင်သူတဦးကလည်း ဝမ်းရောဂါနှင့် အနာစိမ်းပေါက်သည့် ရောဂါဖြစ်နေသူ ရွာသား ၃ဝ ကျော်ရှိကြောင်း ပြောသည်။
ယခုလို ရွာသားများ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျောရောဂါ ဖြစ်ပွားနေခြင်းသည် ရွာသားများအနေဖြင့် ဆန်ရှားပါးနေသည့်အတွက် တောင်ယာထွက် ပြောင်းဆန်များကိုသာ အားပြုစားသုံးနေရာမှ အစာမကြေဖြစ်ကာ ဝမ်းရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာရခြင်းဖြစ်သည်ဟု လုံကျွေးသဲ ကျန်းမာရေးလုပ်သား တဦးက ယခုလို ပြောပြသည်။
"ကျနော်တို့ စားနေရတဲ့ ပြောင်းဆန်ပြုတ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေနဲ့ အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ သူတွေအတွက် အစာမကြေတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါပဲ စားနေရတာ အတော်ကြာပြီဆိုတော့ အာဟာရ ချို့တဲ့တာကြောင့် ဖြစ်တယ်" ဟု သူကပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး ဝမ်းရောဂါကြောင့် ရွာသား အနည်းဆုံး ၄ ဦးအထိ သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ငဖိုင်ပီးရွာသားများမှာ ယခင်က တနေ့ ထမင်း ၃ နပ် စားသောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုလို အစာရေစာ ရှားပါးသည့်အချိန်တွင် ဆန်ပြုတ်နဲ့ ပြောင်းဆန်ပြုတ်ကိုသာ စားသောက်နေရသည်။
အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း ၁၆ဝ ရှိသည့် လိုင်လမ်းကျေးရွာမှ ရွာသားတဦးမှလည်း "ရွာထဲမှာအိမ် ၃ အိမ်ကပဲ ထမင်း ပုံမှန်စားနိုင်တာ ရှိတယ်။ စက်တင်ဘာလ ပထမအပတ်မှာ မိသားစုတစုကတော့ ၃ ရက်နဲ့ ၂ ည ထမင်းစားစရာ မရှိလို့ ရယက က (ဆန်) ၃ ပုံး ပေးခဲ့တာ ရှိတယ်" ဟု သူကပြောသည်။
စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေသည့် ရွာသားများ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေ များတွင် ဝင်ရောက်ခိုလှုံသူများ ရှိသလို အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များကို ရောင်းချပြီး စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရန် ရုန်းကန်နေရသူများလည်း ရှိသည်။
ယခုလို အစားအသောက် ရှားပါးနေချိန်တွင် ပြည်ပမှ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကြောင့် အနည်းငယ် သက်သာရာ ရရှိနေကြောင်း ကျေးရွာများကို စာရေးသူကိုယ်တိုင် ရောက်ရှိခဲ့စဉ် လုံကျွေးသဲ ရွာမှ အသက် ၈ဝ နှစ်ရှိသူ အဘိုးအိုတဦးက ယခုလို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့သည်။
"ပြည်ပက ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့၊ တခြားကူညီတဲ့ အဖွဲ့တွေက ပေးကမ်းနေကြလို့ အခုလို နေနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်တာ မရှိဘူး" ဟု အဖိုးအိုကပြောသည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ် ချင်းပြည်နယ်တွင် ကြွက်များတိုးပွား၍ ဝါးသုန်းမှုဖြစ်ပွားပြီး စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးခဲ့သည့်အတွက် လုံကျွေးသဲကျေးရွာတွင် ရွာသား ၃ဝ ကျော် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အဘိုးအိုက ပြောသည်။
အစိုးရအား အကြည်ညိုပျက်စေမှုဖြင့် ၈၈ ကျောင်းသား တဦးကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 18 2008 20:49 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ အာဏာပိုင်များ အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီး ထိမ်းသိမ်းထားသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ကိုလူတင်ဝင်းအား ယနေ့ ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တံတား တရားရုံးမှ နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်လိုက်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်မြို့နေထိုင်သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုလူတင်ဝင်းအား တရားလိုဖြစ်သည့် ကျောက်တံတားရဲစခန်း ရဲအုပ် စိုးနိုင်မှ နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) နှင့် လူစုလူဝေးဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၁၄၅ ၁၄၇ တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂-နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
“ဒီနေ့ အမိန့်ချလိုက်တယ်။ ၂ နှစ် ချလိုက်တယ်။ သူက မနှစ်ကဘဲ ထွက်လာရတာ။ အပြင်မှာ နေတာ သိပ်မကြာသေးဘူး၊ ခုပြန်ချခံရပြီလေ” ဟု ဗဟိုတရားရုံး ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ရက်နေ့ တွင် ဆူးလေမီးပွိုင့်အနီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ ရှာဖွေ စစ်ဆေးနေချိန်တွင် ကိုလူတင်ဝင်း၏ ခါးကြားထိုးထားသည့် “၈၈ သဘောထား” အမည်ရှိ စာအုပ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
“ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေကို လိုက်ရှာဖွေ စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာ လူတင်ဝင်းရဲ့ ခါးကြားက “၈၈ သဘောထား” စာအုပ် တွေ့သွားတယ်။ သူက အဲဒီနေ့ စာအုပ်တိုက်ကိုအသွား လုံခြုံရေးတပ်က ဖမ်းလိုက်တာဘဲ” ဟု ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က ဆက်ပြောသည်။
ကိုလူတင်ဝင်းသည် ၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေး အမှုဖြင့် ပဲခူးတိုင်း သာယာဝတီထောင်တွင် ၉ နှစ်ကြာ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
အလားတူ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်လာလ ၁၅ ရက်နေ့ကလည်း အာဏာပိုင်များက ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (ILO) ထံ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်တပ်မှ ကလေးစစ်သား အသုံးပြုနေမှုနှင့် အဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများ တိုင်ကြားရန် ကြိုးစားခဲ့သည့် စားခဲ့သူ စမ်းချောင်းမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဌ ဦးသက်ဝေအား အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
စစ်တပ် အာဏာသိမ်း နှစ် ၂ဝ ပြည့် ဆန့်ကျင်ရေး ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ ပြုလုပ်
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 18 2008 20:44 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် စစ်အစိုးရ၏ အာဏာသိမ်းသည့် နှစ်၂ဝ-ပြည့်အား ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ကချင်ကျောင်းသားထုမှ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး စာစောင်များ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ အထက်တန်း ကျောင်းများအပြင် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ အစိုaရုံးများနှင့် ရပ်ကွက်နေရာ အနှံ့အပြား နှင့် ဈေးများတွင် စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် စာစောင်များ နံရံများတွင် ကပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်းများ လုပ်ခဲ့ကြောင်း ကချင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ (AKSYU) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးက မဇ္ဈိမကို ယခုလို ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ရွာတွေ၊ ရပ်ကွက် မူလတန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်း အားလုံးမှာ လိုက်ကပ်တယ်။ လမ်းကြို လမ်းကြား အားလုံးမှာပေါ့နော်။ ရပ်ကွက်အားလုံးဘဲ၊ ရွာတွေမှာလဲ လိုက်ကပ်တယ်။ ရုံးဆိုရင် ခြံစည်းရိုး တံခါးပေါက်တွေ အားလုံး လိုက်ကပ်ထားတယ်” ဟု AKSU မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။
ယခုလို စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် စာစောင်၊ ပိုစတာများအား လိုက်လံဖြန့်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ယခုလို ဆက်၍ ပြောသည်။
“အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ပထမအချက်က မြန်မာပြည် ကျောင်းတွေနဲ့ သံဃာများ လုပ်ရှားများမှုနှင့်ထပ်တူ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးနှင့် ဒုတိယအချက်က ဒီနေ့ အာဏာသိမ်းတဲ့ နှစ်၂ဝ-ပြည့်နေ့ကို ဆန့်ကျင်တာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆက်ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်လှုံ့ဆော်စာတွင် စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များအား ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး ချက်ချင်း လွတ်ပေးရေး နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုကို အမြန်ဆုံးစတင်ရန် တောင်းဆိုထားသည့်အပြင် “နအဖ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးပါစေ” “ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အောင်နိုင်ရမည်” စသည်ဖြင့် ကြွေးကြော်စာတမ်းများ လိုက်လံဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
၎င်းလှုံ့ဆော်စာများကို A4 အရွယ် စာရွက် စုစုပေါင်း ၄ဝဝ ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးနောက် အာဏာပိုင်များက လိုက်လံသိမ်းစည်း နေသော်လည်း ကချင်ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု စာဖြန့်ဝေခဲ့သူတဦးက ပြောသည်။
“အဲဒီစာရွက်တွေကို ၉ နာရီလောက်မှာတွေ့တော့ တွေ့တွေ့ခြင်း လိုက်သိမ်းနေတယ်။ ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးကြားနေရတာက သတင်းပေးနိုင်တဲ့သူကို ငွေကြေးပေးမယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ ဘယ်လိုဘဲ ပြောပြော ကျနော်တို့က ဒီလိုလုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်သွားမှာဘဲ။ နောက်လဲ ဆက်လုပ်အုန်းမှာဘဲ” ဟု သူကပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက် အပြစ်မဲ့ ဆန္ဒပြသူ စုစုပေါင်း ၃ဝဝဝ ထက်မနဲ သေဆုံးကာ အများအပြား ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့သည် စစ်တပ်မှ နိုင်ငံတော် အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
အာဏာသိမ်း နအဖ အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ စုစည်း၍ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြပွဲတခုအား ဂျန်တား မန်တားတွင် ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရ မြန်မာနိုင်ငံ” (NCGUB - အနောက်ဘက်ဒေသ) ဝန်ကြီး ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် မလျော့သောဇွဲဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယခုလို တိုက်တွန်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများ အားလုံးက ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်ရမယ်။ ပြည်သူလူထု အင်အားနဲ့သာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း သတ္တိရှိရှိနဲ့ ဇွဲမလျော့ဘဲ ကြိုးစားသွားရမယ်။ တိုက်ပွဲ ဝင်သွားရမယ်” ဟု သူက ပြောဆိုသည်။
စစ်အစိုး အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် နှစ် ၂ဝ ပြည့်ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများအား မလေးရှား၊ အမေရိကန် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက တခဲနက် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည် လုံခြုံရေး တင်းကျပ်
သံဃာတော်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာ တနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်၊ မြန်မာစစ်အစိုး
ရက ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို သွေးထွက်သံယို နှိမ်နင်းခဲ့တာ အနှစ် ၂၀ ပြည့်
တဲ့ အချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ကြီးတချို့မှာ လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ချထားတာတွေ ရှိနေ
ပါတယ်။ ဒီလို အာဏာပိုင်တွေဘက်က ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ
တက်ကြွသူတွေကလည်း အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတချို့ လုပ်နေတာတွေ ရှိနေ
တယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောကြပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြ
သံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့ကြွချီ ဆုတောင်းပွဲတွေကို လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေက
သွေးထွက်သံယို နှိမ်နင်းခဲ့တာ နှစ်ပတ်လည်လာတဲ့အချိန်၊ ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆို
အုံကြွခဲ့ကြတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ချေမှုန်းခဲ့တာ အနှစ် ၂၀ ပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ အာဏာပိုင်
တွေဘက်က လုံခြုံရေးတွေကို တိုးမြှင့်ချထားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲက ရန်ကုန်လို
မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်း လုံခြုံရေးအတွက် အာဏာပိုင်တွေက စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေ
တာ၊ ရှောင်တခင် ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း မြို့ခံတယောက်က
"အခု လုံခြုံရေးအခြေအနေကတော့ တော်တော်တင်းကျပ်တယ်။ ညပိုင်းတွေမှာ
ကားတိုင်းကားတိုင်းကို ရပ်ခိုင်းပြီးတော့ လိုင်းကားတွေပေါ်တက်၊ ခရီးသည်တွေရဲ့
အိတ်တွေကိုဖွင့်ရှာ လုပ်နေတယ်။ သူတို့က အင်အားတော်တော်များတယ်။ တနေရာ
တနေရာမှာ လူ လေးငါးဆယ်လောက် စောင့်နေတယ်။ စွမ်းအားရှင်တွေပါမယ်၊ ရ၀တ
"ဧည့်စာရင်းကတော့ သူတို့ မသင်္ကာတဲ့အိမ်တွေကို စစ်တယ်၊ အိမ်တိုင်းတော့ မစစ်ဘူး။
စစ်ရင်လည်း သာမန်စစ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ခြင်ထောင်တွေ ဘာတွေ ဖွင့်ရှာ၊ လူတွေ
အကုန်လုံးထုတ်၊ အဲလိုအထိ စစ်တယ်။ သံဃာတော်တွေ ရန်ကုန်မြို့တွင်း မနှစ်ကစတာ
၁၈ ရက်နေ့ဆိုတော့ ဒီနေ့ကို သူတို့က အဓိကထားပြီး စစ်တယ်လို့ ယူဆရတယ်။ အရင်
ရက်တွေက လုံခြုံရေး ချတော့ချတယ်၊ ဒီလောက် မတင်းကျပ်ဘူး။ မနေ့ကစပြီး
တင်းကျပ်တယ်။ ဒီနေ့ဆိုလည်း ရဲကားတွေ၊ လုံထိန်းကားတွေ ပတ်နေတာတော့
ဒီလို လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ချထားတာ၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတာတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ
မြန်မာနိုင်ငံက အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ် (အန်န်အယ်လ်ဒီ) ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ပါတီဌာနချုပ်ရုံး အနီးတ၀ိုက်မှာလည်း
ထူးထူးခြားခြား တိုးမြှင့်ချထားတာတွေရှိတယ်လို့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက
"သုံးရက်လောက်ရှိပြီ။ ဒီလောက် လုံခြုံရေးယူတာ မတွေ့ဖူးဘူး။ တော်တော့ကိုများ
တယ်၊ လုံခြုံရေးယူတာ။ ဟိုနေရာတွေ့လိုက်၊ ဒီနေရာတွေ့လိုက်နဲ့၊ တော်တော်များပါ
ဒီလို အာဏာပိုင်တွေရဲ့ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုတွေကြားကပဲ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှား
သူတွေဘက်ကလည်း လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုတချို့ လုပ်ဆောင်နေတာတွေကလည်း ရှိနေ
တာပါ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေရာတချို့မှာဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာ
သံဃာတော်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ဖွယ် လှုံ့ဆော်မှုတွေ ရှိနေ
တယ်လို့လည်း နောက်ထပ် ရန်ကုန်မြို့ခံတယောက်က ဆိုပါတယ်။
"နှစ်ပတ်လည်နေ့ စက်တင်ဘာ ၁၈ ဆိုတဲ့စာသားနဲ့၊ အောက်မှာက မနှစ်တုန်းက
ဘုန်းကြီးတွေလှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံပါတဲ့ဟာနဲ့၊ နောက်ကျောမှာက အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏
လုပ်ငန်းကို ဆုံးခန်းတိုင်ထိ ဆောင်ရွက်မည်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုပြီး နောက်ကျော
မှာ ရိုက်နှိပ်ထားတယ်။ အဲဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကို ကားပေါ်က ကျဲချတယ်။ တချို့တွေ
ကလည်း ကြည့်တော့ ကြည့်ကြတယ်။ သူတို့မရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ အလုအယက်
ရန်ကုန်မြို့မှာ လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ချထားတာတွေ ရှိနေတာနဲ့အတူ အစိုးရဆန့်ကျင်
ရေး လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေတဲ့အကြောင်း မြို့ခံတယောက်က ပြောပြထားတာပဲ
ဘေးဖြစ်စေသော တရုတ်နို့မှုန့် မြန်မာပြည်ကို တင်သွင်းခဲ့
တရုတ်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီ ၂ခုဟာ မသန့်ရှင်းတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကလေး နို့မှုန့်တွေ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၅နိုင်ငံကို တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ ဒီနေ့ထုတ် ဘန်ကောက် သတင်းစာမှာ နောက်ဆုံးရသတင်း အဖြစ် တင်ပြထားပါတယ်။ ဆောင်ကန် နဲ့ ရာရှီလီ ကုမ္ပဏီတို့ဟာ ရီမွန်၊ ဘာရန်တီ၊ ဂါဗွန်းနိုင်ငံတို့ဆီ တင်ပို့မိတဲ့ နို့မှုန့်တွေကို ပြန်သိမ်းနေပါပြီလို့ သက်ဆိုင်ရာ တရုတ် အရာရှိတွေက ဆိုပါတယ်။ အစောပိုင်းသတင်းတွေအရ အဲဒီနို့မှုန့်တွေထဲမှာ မယ်လမင်းတွေ ပါဝင်နေတာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီ ၂ခုဟာ မသန့်ရှင်းတဲ့၊ တနည်းပြောရရင် မယ်လမင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ နို့မှုန့် ၆၉မျိုး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၂ခုမှာ အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘန်ကောက်ပို့စ်ရဲ့ ဖော်ပြချက်ပါ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ နို့မှုန့်ကိုစားသုံးမိလို့ ကလေးငယ်သုံးဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီးသလို ခြောက်ထောင် ကျော်ကတော့ နာမကျန်းဖြစ်နေကြပါပြီ။ ဒီ နို့မှုန့် ပြဿနာကြောင့် နိုင်ငံငါးနိုင်ငံကိုနို့မှုန့်တင်ပို့နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတချို့အပါအ၀င် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်လုပ်တဲ့ နို့မှုန့်တွေကို နိုင်ငံအနှံ့ ဈေးကွက်ထဲကနေ ပြန် ရုပ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ဦးကျော်ကျော်သိန်းက တရုတ်နို့မှုန့်ပြဿနာ နောက်ဆုံးအခြေအနေ အပြည့်အစုံ တင်ပြပေးပါတယ်။
ခုချိန်ထိဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နို့မှုန့်တွေကို စားသုံးခဲ့ရလို့ ကလေးငယ် ခြောက်ထောင်ကျော် နာမကျန်း ဖြစ်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီထဲက သုံးဦးကတော့ သေဆုံးခဲ့ကြရပြီးပြီလို့ တရုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ချန်းဇုက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြောကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Daniel Schearf ပေးပို့တဲ့သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မိဘတွေကနေ ဆေးရုံတင်လာတဲ့ ကလေးငယ်အရေအတွက် ပိုများလာတာမို့ အရေအတွက် တိုးလာဖွယ်ရှိကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တရုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ပြောသွားပါတယ်။
“နို့စို့အရွယ်ကလေးငယ် ၁၃၂၇ ဦးဟာ ဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်၊ ၁၅၈ ယောက်ကတော့ စိုးရိမ်ဖွယ် ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ် တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားနေကြရတယ်”လို့ တရုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ချန်းက မန်ဒရင်းဘာသာစကားနဲ့ ပြောသွားပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာခံစားကြရတဲ့ ကလေးသူငယ် အများအပြား ဆေးရုံရောက်လာပြီးတဲ့နောက် မသန့်ရှင်းတဲ့နို့မှုန့်ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး နို့ထွက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ဆန်လု နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဟာ မယ်လမင်းလို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း တမျိုးကို သူတို့ထုတ်တဲ့နို့မှုန့်တွေထဲမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီမယ်လမင်းဓာတုပစ္စည်းဟာ စက်မှု လုပ်ငန်းသုံး ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပြီး အစားအစာတွေမှာ ပရိုတိန်းအသားဓာတ် အများအပြားပါဝင်နေတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။
ဆန်လု ကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ယာ လေးဆယ် ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နယူးဇီလန် နိုင်ငံက ဖွန်တယ်ရာ နို့ထွက် ပစ္စည်း လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီက မသန့်ရှင်းတဲ့ နို့မှုန့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေကို ပြောခဲ့ပေမယ့် ဆန်လု ကုမ္ပဏီဘက်က တုန့်ပြန် လုပ်ဆောင်ဖို့ နှေးကွေးခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်က အစိုးရတာဝန်ရှိသူချင်း တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေ ဒီကိစ္စကိုပြောခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှသာ တရုတ် အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဈေးသက်သာတဲ့ တရုတ်နို့မှုန့်တွေကို တနိုင်ငံလုံးလိုလို အသုံးပြုနေကြတာပါ။ ဒီနို့မှုန့်တွေဟာလည်း တရားဝင် လမ်းကြောင်းက တင်သွင်းပြီး တာဝန်ရှိသူတွေက သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီးမှ ဈေးကွက်ထဲ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နယ်စပ်ဒေသ မှောင်ခို လမ်းကြောင်းတွေက တဆင့် ဈေးကွက်ထဲဝင်လာတာကို ကလေး လူကြီး ၀ယ်ယူ စားသုံးနေ ကြတာပါ။
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ဒေသ ကုန်သည်တဦး ဗွီအိုအေကိုပြောပြတာက ဒီလိုပါ။
“ဗမာပြည်က လူတွေ အများဆုံး သုံးတာကတော့ အဓိက နို့မှုန် နွားတံဆိပ် အထုတ် အနီကို သုံးတယ်။ အဲဒါက တရားမ၀င် လမ်းကြောင့်ကပဲ သွင်းတယ်။ အဲဒီကောင်တွေက ဗမာပြည်က တရားဝင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးက သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ထော်လာဂျီတို့နဲ့ တပိုင်တနိုင်ပဲ သွားနေကြတာပေါ့။ ဗန်မော်လမ်းကြောင်းက တဆင့်ပေ့ါ။ ကျွန်တော်တို့ မူဆယ်ဘက်ကလည်း သွားတာပဲ။ ပါမစ်လည်း မပေးဘူး။ စားသောက်ကုန်တွေ ဖြစ်နေတာကိုး။ ဗမာပြည်မှာ ရှိတဲ့ တရုတ်ဘက်က စားသောက်ကုန် မှန်သမျှ မှောင်ခိုလမ်းကြောင်းက သွားတာပဲ။ စားသောက်ကုန်ကို တရားဝင် ပါမစ် မပေးဘူး။ ဗမာပြည်ထဲမှာ နွားတံဆိပ် သုံးတယ်။ အပြာရောင် သမင် တံဆိပ်က ဈေးနဲနဲ ကြီးတယ်။ သမင်တံဆိပ်က ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက တရုတ်ပြည်မှာ ရှိတယ်တဲ့။ အခုတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ရှိတော့ ရှိသေးပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေက သိမ်းတာတွေ လုပ်ကုန်ပြီ။ ဟိုဘက်ကို သွင်းတယ် မသွင်းဘူးဆိုတာက ပြောရခက်တယ်။ ဈေးက နဲနဲကြီးတယ်တဲ့။ သုံးတဲ့လူလည်း သိပ်မရှိဘူး။”
နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ တရုတ် နို့မှုန့်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျယ်တ၀ံ့ ရေးသား ဖော်ပြနေကြပေမယ့် မြန်မာ အစိုးရပိုင် သတင်း မီဒီယာတွေမှာတော့ ဒီအကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြတာ၊ စားသုံးသူတွေကို သတိပေးတာ ခုချိန်ထိ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံထဲ လက်ရှိဝင်ရောက်နေတဲ့ တရုတ်နို့မှုန့်တွေကိုစားသုံးဖို့ ဘေးကင်း မကင်း၊ ဒီအပေါ် စားသုံးသူတွေ က ဘယ်လောက် သတိ ထားမိ မထားမိ ဆိုတာတွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသေးပါဘူး။
မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေက နို့မှုန့်လို စားကုန် ပစ္စည်းတွေကို တရားဝင် တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့် တရားဝင် ကြေညာပြီး ပိတ်ပင် တားမြစ်မယ်ဆိုရင် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတာကို ၀န်ခံရာကျမှာစိုးလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်နိုင်ငံက ငြိုငြင်မှာ စိုးလို့လား စသည်အားဖြင့် မေးခွန်းထုတ် ဝေဖန်တာတွေလည်း ရှိနေကြောင်း ပါခင်ဗျား။
အာရှငွေကြေးဈေးကွက် စတော့ခ်ရှယ်ယာတွေ ဈေးချရောင်းနေရ
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဈေးကွက် အကျပ် အတည်းတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်
ငွေကြေးစနစ်လည်ပတ်မှု ပိုပြီး အားကောင်းလာဖို့အတွက် အဓိကဦးဆောင်
တဲ့ ဗဟိုဘဏ်ကြီးတွေက ငွေတွေထုတ်ပေး ပြီး အားဖြည့်နေကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ
ဈေးကွက်နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအကြား စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေ လျော့သွားစေဖို့
အတွက် အခုလို ငွေတွေ ထပ်ပြီးဖြည့်ပေး နေတာပါ။ ကြာသပတေးနေ့မှာတော့ အာရှစတော့ခ်ဈေးကွက်မှာ စတော့ခ်ရှယ်ယာ တွေ ဈေးလျှော့ရောင်းခဲ့တာတောင် အရောင်းအ၀ယ် အေးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စု အဓိကရှယ်ယာဈေးကွက် ဝေါလ် စထရိ (Wall Street) မှာ ရင်ဆိုင်နေရ
တဲ့ ငွေကြေးအကျပ်အတည်းတွေကနေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအကြား အခုလို စတော့ခ်
ဈေးကျဆင်းမှုတွေ ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ကနေ ရွန် ကော်ဘင်
(Ron Corben) သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်၊ ဂျပန်နဲ့ ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ဗဟိုဘဏ်တွေ၊
အခြားနိုင်ငံတွေက ကမ္ဘာ့ဘဏ်စနစ် ငွေလည်ပတ်မှုတွေအတွက် ငွေသန်းထောင်ပေါင်း
၁၈၀,၀၀၀ လောက် ထုတ်ပြီး ဖြည့်ပေးနေပါတယ်။ ငွေထုတ်ချေးတဲ့သူတွေ၊ ငွေချေး
ငှားတဲ့သူတွေအတွက် ငွေပိုပြီးလည်ပတ်နိုင်အောင် အခုလို ငွေထပ်ထုတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါ
တယ်။ စတော့ခ်နဲ့ ငွေစုလက်မှတ် ဘွန်းဈေးကွက်တွေ ထိုးကျခဲ့လို့ ငွေချေးငှားတဲ့
လုပ်ငန်းတွေ ယိမ်းယိုင်ခဲ့ရတာတွေကို သက်သာအောင် ထိန်းကြောင်းဖို့ ကြိုးစားတာ
ဒီလို ငွေတွေထပ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကြေညာချက်တွေကြောင့် ရင်းနှီး
မြှုပ်နှံသူတွေ သက်သာရာရပုံ ရသွားပါတယ်။ အာရှကုန်သွယ်ရေးမှာ မနေ့က ညနေ
ပိုင်း စောစောပိုင်းက တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ ပမာဏတွေ ပြန်ပြီး အဖတ်မဆည်နိုင်ခဲ့
ပါဘူး။ ဟောင်ကောင် ဆန်း (Seng) စတော့ခ်အညွှန်းကိန်းဟာ နေ့ခင်းပိုင်းမှာ ၇%
ကျော် ထိုးကျခဲ့ပါတယ်။ ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာလည်း အပြောင်းအလဲ မရှိသလောက်
အခုအချိန်အထိ အာရှဈေးကွက် အားလုံးနီးပါး အရှုံးပေါ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်
နစ်ကေး (Nikkei) စတော့ခ်ဈေးဟာ ၂% ကျော်ကျခဲ့ပြီး သုံးနှစ်အတွင်း အများဆုံး
ဆုံးရှုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ သြစတြေးလျ ရှယ်ရာတွေလည်း အလား
တူ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရက AIG အာမခံကုမ္ပဏီကြီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း
၈၅,၀၀၀ ထပ်ဖြည့်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်အောင် ကယ်တင်ခဲ့ပေမယ့် အာရှ
မှာရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကတော့ နောက်ထပ်ပြဿနာတွေ ကြုံရမှာကို စိုးရိမ်နေကြ
ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လီမန် ဘရားသားစ် (Lehman Brothers)
ကုမ္ပဏီကြီး ဒေ၀ါလီခံလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အခြားဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ အလားတူ
ထိခိုက်လာမှာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရ ပင်စင်ငွေစုငွေချေးရန်ပုံငွေ လုပ်ငန်းကြီးက စီးပွားရေးပညာရှင် အကြီး
အကဲ အာပွန် ချဝတ်ခ်ရန်ကိုင် (Arporn Chewakrengkai) ကတော့ အာရှဘဏ်
တော်တော်များများဟာ အခု ငွေကြေးအကျပ်အတည်းတွေ့နေတဲ့ အမေရိကန်ဘဏ်ကြီး
တွေက ပိုင်ဆိုင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
"ဒီလိုဘဏ်ကြီးတွေ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက် အာရှဘဏ်တွေ တော်တော်များများ
အပေါ်မှာလည်း ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။ အာရှဒေသတွင်း
စတော့ခ်ရှယ်ယာဈေးကွက်ဟာ နောက်ထပ် ထပ်ပြီး ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိမယ်လို့ ကျမ
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာ စတော့ခ်ဈေး အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတည်းက
ကမ္ဘာ့ရှယ်ယာဈေးကွက်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း တကုဋေနဲ့ ကိုးသန်း
ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ အာပွန် ချဝတ်ခ်ရန်ကိုင်ကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ
ငွေထုတ်ချေးဖို့ ငွေနည်းသွားတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရေး အခက်အခဲရှိလာနိုင်ပြီး
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုလည်း နှောင့်နှေးလာနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခုစီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်း ထောင်နဲ့ချီတဲ့
အိုးအိမ်အကြွေးဝယ်ယူတဲ့သူတွေက သူတို့ လစဉ်ပေးရမယ့် အိမ်ကြွေးတွေ ပြန်မဆပ်
နိုင်တာက စပြီး ချေးငွေလျော့နည်းလာရာကနေ အိမ်ယာငွေချေးလုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်
ခဲ့တာက မီးခိုးကြွက်လျှောက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ကမ္ဘာ့ငွေကြေး အကျပ်အတည်းတွေအကြား စီးပွားရေးပညာရှင် တော်တော်
များများကတော့ ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေ တော်တော်များများ ပြင်ဆင်တာတွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ
ပြောင်းလဲတာတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ ဒီထက်
ပိုပြီး တခုနဲ့တခု ပေါင်းစည်းပြီး လုပ်ရတာတွေ၊ အခက်အခဲ ကြုံနေရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို
အခြားကုမ္ပဏီတွေက ၀ယ်ယူသိမ်းပိုက်တာမျိုးတွေ ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထား
အစ္စရေးရွေးကောက်ပွဲ အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် ရွေးချယ်
Luis Ramirez’s Report in Burmese -
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသော မစ္စဇစ်ပီလစ်ဗ်နီ။
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈။
အစ္စရေးနိုင်ငံက အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်ရှိအာဏာရ ကာဒီမား
(Kadima) ပါတီအတွင်း ကျင်းပတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ပွဲမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဇစ်ပီ လစ်ဗ်နီ
(Tzipi Livni) ပွတ်ကာသီကာလေး အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် အနှစ် ၃၀ အတွင်း ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်
ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ စွပ်စွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်း ရာထူးကနုတ်ထွက်တော့မယ့်
လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် အီဟွတ်ဒ် အိုလ်မာ့တ် (Ehud Olmert) နေရာမှာ အစားထိုး တာဝန်ယူသွားမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဗွီအိုအေ ဂျေရုဆလင်သတင်းထောက် လူးဝစ္စ ရာမီရက်ဇ် (Luis
Ramirez) သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်းတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်
လိုစိတ်ရှိတာကြောင့် သူမဟာ ပါလက်စတိုင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်
ချက်ပဲဆိုပြီး သူမ အခုလို အရွေးခံလိုက်ရတဲ့အပေါ် မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီးထားတဲ့သူ
ထောက်လှမ်းရေးမှူးဟောင်း၊ ရှေ့နေဟောင်းနဲ့ ကလေး ၂ ယောက်မိခင် လစ်ဗ်နီဟာ
လက်ရှိ အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ထိပ်တန်းက ပါဝင်
လုပ်ဆောင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့ သူမကို ပါလက်
စတိုင်းတွေနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း အဖြေရှာရေးကို လိုလားသူတွေက ထောက်ခံခဲ့ကြတာပါ။
တချိန်တည်းမှာပဲ လိုအပ်ရင် တပ်အင်အားကို အသုံးပြုမယ်လို့ သူမရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကို
လည်း လူတော်တော်များများက သဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျေရုဆလင်မြို့ကို ဘယ်လိုသဘောထားမယ်၊ အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နယ်မြေတွေ
ပါလက်စတိုင်းတို့ ပြန်အပ်ရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်းဒေသအတွင်း ဂျူးလူမျိုးတွေ ၀င်ရောက်
အခြေချနေထိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ
ဟာ လောလောဆယ် ရပ်တန့်နေပါတယ်။
အစ္စရေးနိုင်ငံရေး မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတာကြောင့် အစ္စရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနိုင်မှု
အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။
သူမအနေနဲ့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စကို အလျှင်အမြန် လုပ်ဆောင်သွားမယ့်
အကြောင်း သူမ အနိုင်ရကြောင်း လက်ခံစကားပြောတဲ့အထဲမှာ ထည့်သွင်းပြောကြား
သူမက သူမရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဟာ လုံခြုံရေးအရ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့
အတွက် အစိုးရအဖွဲ့ တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင်
လုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ စီးပွားရေး တည်ငြိမ်မှုရရှိရေးတို့အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားပါ
အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ဝါဒကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ကာဒီမားပါတီအနေနဲ့ အစ္စရေး
ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ ယုံကြည်ထောက်ခံမှုကို ရရှိဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ရာထူးက
နုတ်ထွက်တော့မယ့် ၀န်ကြီးချုပ် အီဟွတ်ဒ် အိုလ်မာ့တ်ရဲ့ လာဘ်စားမှု အရှုပ်အထွေးနဲ့
ပါတီဟာ အတော်လေး နာမည်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့က လစ်ဗ်နီ အခုလို ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့အပေါ်
ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတချို့ကလည်း ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အာရပ်လူမျိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့
ဆက်ဆံဘူးတဲ့ သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကြောင့် ဒါဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်
ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာပဲလို့ ဂျေရုဆလင်အခြေစိုက် ပါလက်စတိုင်း ပညာရှင်များ
နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးအဖွဲ့က မာဒီ အဗ္ဗဒူလ် ဟာဒီ (Mahdi Abdul Hadi) က ပြောပါ
ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ကတိပြုထား
တဲ့ လစ်ဗ်နီအနေနဲ့ အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ သီတင်းပတ်အနည်းငယ်ပဲ အချိန်ရှိပါတော့
တယ်။ သူမအနေနဲ့ အဲဒီလိုမှ အစိုးရသစ် မဖွဲ့နိုင်ရင် အစ္စရေးမှာ အထွေထွေ
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတနှစ်မြောက်အောက်မေ့ဖွယ်ပွဲ သာသနာ့ဥသျှောင် (ထိုင်းဌာနခွဲ) ကျင်းပ
(စက်တင်ဘာလ ၁၈၊ ၂၀၀၈။ သောင်ရင်းနဂါး)
ပခုက္ကူသံဃာတော်များကို အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီးမှ နအဖစစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခဲ့သော သံဃာ့ကံဆောင်ပွဲ နှင့်ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတနှစ်မြောက်အောက်မေ့ဘွယ်ပွဲအား သာသနာ့ဥသျှောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်းဌာနခွဲ) ကထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်တနေရာရှိကျေးရွာတခုတွင် ယနေ့ကျင်းပခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် မကွေးတိုင်း၊ ပခုက္ကူမြို့မှသံဃာတော်များအား ဒေသခံအာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းကို ၀န်ချတောင်းပန်ရန် အချိန်အကန့်အသတ်ပေးထားလျှက် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ပတ္တနိကုက္ကုဇ္စနကံဆောင်သပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအတွင်းရှိ အောက်မေ့ဘွယ်နေ့ဖြစ်သည်။ ယနေ့တနှစ်မြောက် ကံဆောင်သပိတ်တိုက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သာသနာ့ဥသျှောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်းဌာနခွဲ) မှ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဆရာတော် ဦးဩဘာသ က “ ဒီကနေ့ဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က ပတ္တနိကုက္ကုဇ္စနကံကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှ ကံကိုကံဆင့်ခဲ့တဲ့အောက်မေ့ဘွယ်နေ့တနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တုန်းကလည်း န၀တ စစ်အစိုးရက သံဃာတော်တွေကို အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီး ပြန်လည်ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာလည်း ပခုက္ကူသံဃာတွေအပေါ် အလားတူ ပြုမူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို သာသနာဖျက်၊ ဘာသာဖျက်လုပ်ရပ်တွေကို မဇ္မျိမဒေသ (အိန္ဒယပြည်) က အဇာတသတ်မင်းလက်ထက်မှာလည်း ကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတာမို့ ပတ္တနိကုက္ကုဇ္စနကံကို သံဃာတော်တွေကစတင်ကံဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ကျူးလွန်စော်ကားတဲ့ နအဖစစ်အစိုးရကို ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ၀ိုင်းဝန်းဖြုတ်ချကြပါလို့ ပန်ကြားလိုက်ပါရစေ။ ” ဟု မိန့်ကြားသည်။ ဆက်လက်၍ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် လူထုကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်သော ပန်ချာပီအမျိုးသား ဦးပန်ချာ ခေါ် ဦးကာကာ ကလည်း “ ကျနော်ဟာ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အထိ သံဃာအတွက်ရော လူထုအတွက်ပါ ကျရာနေရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ ၁၉၈၈ လူထုလှုပ်ရှားမှု က ထူးခြားတာကတမျိုး၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးက ထူးခြားတာ တမျိုးစီဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေကိုအစဉ်တစိုက်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကပေးတဲ့သင်္ခန်းစာအရ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေ နအဖ က ဖန်တီးချင်တိုင်ဖန်တီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ စက်တင်ဘာ ၂၆/၂၇/၂၈ ရက်နေ့တွေမှာ နအဖက အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းနေချိန်မှာ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အခြားဘာသာဝင်တွေက သံဃာတော်တွေ အကူအညီပေးခဲ့ကြ၊ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက် မိမိတို့ကျရာတာဝန်ကို ကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်” ဟူ၍ ပြောကြားသွားသည်။ ထို့နောက် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသည့် အလုပ်သမား ကိုဇင်ကလည်း “ ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်လာတဲ့ အခွေမျိုးစုံကနေ ရွှေ၈ါရောင်တော်လှန်ရေးအကြောင်း၊ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းအကြောင်း ကြည့်ရှုရ၊ လေ့လာရပါတယ်။ အခုပြောသွားတဲ့ သံဃာတော်တွေ လူကြီးတွေ ကျောင်းသားတွေ အတွေ့အကြုံပေါင်းစုံကို မှတ်သားရပါတယ်။ ကိုယ့်ဝမ်းစာအတွက် အလုပ်လုပ်ရင်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က နာဂစ်မုန်တိုင်းမှာ အလှူငွေနဲ့အ၀တ်အထည်ထည့်သလိုမျိုးပါဝင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ယနေ့ကျင်းပသော တနှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဖွယ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲသို့ ထိုင်း - မြန်မာနယ်စပ်ရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၅၀ ခန့်တက်ရောက်လာပြီး အခမ်းအနားမှ ဝေငှသော စာရွက်စာတမ်းများကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လေ့လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဒဂုံပရိယတ္တိမှ သံဃာသုံးပါး ယခင်အပတ်ကဖမ်းဆီးခံရ
စက်တင်ဘာ ၁၈။ ကိုရန်ကုန်
ရန်ကုန်မြို့ပန်းပဲ တန်း မြို့နယ် ရှိ ဒဂုံ ပရိယတ္တိ စာသင် တိုက်သို အာဏာပိုင်များရောက်ရှိလာပြီး စာသင် တိုက် ရှိ သံဃာတော် များစာရင်း ကိုတောင်း ယူ ပြီးစစ်ဆေးရာ နယ်မှာကြွရောက် တည်းခိုနေသော အာဂန္တု ရဟန်းတော် သုံးပါး ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားသည် ဟု သိရပါသည် ။ မည်သည့် နေရာသို ခေါ်ဆောင်သွားသည် ကိုအတိအကျ မသိ သေးဘဲ ၊ ကျောင်းတိုက် ရှိ စာဝါလိုက် နေကြသော ရဟန်းတော် များအားလည်း ဇာတိရပ်ရွာများ သို့ပြန်လည် စေလွှတ်နေကြောင်းသိရသည်…။ အလားတူ ပဲ ရန်ကင်းမြို့နယ် အပါအ၀င် ရန်ကုန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း များမှ အေးချမ်းစွာဖြင့်ပညာသင် ယူလျှက်ရှိသော သံဃာတော် များကို အာဏာပိုင် များမှ နယ်များသို့အတင်းအဓမ္မပြန်လည် စေလွှတ်နေပသည်။
“ယခုအချိန်သမယ သည် သံဃာတော် များအဖို့ဝါတွင်းကာလဖြစ်သည့်အလျှောက် သံဃာတော် များအား ဇာတိရပ်ရွာ များသို့အတင်းအဓမ္မ ပြန်လည်စေလွှတ်နေသဖြင့် စာသင်သား သံဃာများ အခက်အခဲ များရှိနေသည့်အပြင် ရဟန်းတော်များ၏ ၀ိနည်းသိက္ခာနှင့်လည်းညီညွှတ်မှု မရှိ ပါ” ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လူငယ်တဦးက ပြောဆိုသည်။
အာဏာသိမ်း နှစ် ၂၀ ပြည့် ရန်ကုန်
စက်တင်ဘာ ၁၈။ ရဲအောင်သော်
တကြော့ပြန် စစ်အာဏာသိမ်း နှစ် ၂၀ ပြည့်သည့် ယနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် အရေးကြီး နေရာများတွင် လုံခြုံရေး အစောင့်အရှောက်များ ပုံမှန်အတိုင်း ချထားသည်။ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အဖမ်းဆီးခံထားရသဖြင့် လှုပ်ရှားမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၂၀ ပြည့် အခမ်းအနားကိုသာ လာမည့်အပတ် ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။
သံဃာတော်များ သီတင်းသုံး နေထိုင်ရာ ကျောင်းတိုက်များတွင် ၀င်ရောက်စီးနင်း ရှာဖွေခြင်း၊ အာဂန္တူ သံဃာများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ရဟန်းငယ်များကို နေရပ်ပြန်စေခြင်းများကို စာသင်တိုက်များမှ နာယက ဆရာတော်များ၊ စာချသံဃာများ ကြုံတွေ့နေရသည်။
"ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး” အပြီး တနှစ်အကြာ မြန်မာပြည်
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 18 2008 15:00 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်မြို့၏ လမ်းမများပေါ်တွင် ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များနှင့် လူထု၏ ထစ်ချုန်းဟစ်ကြွေးလျက် ရှိသော အသံများကြားတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီတခုမှ မန်နေဂျာမလေး ဝတ်ရည် (အမည်ပြောင်းထားသည်) လည်း သူမ၏ ရုံးခန်းလေးထဲမှ လမ်းပေါ်ရှိ ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးကို ကြည့်ရှုရန် ပြေးထွက်လာခဲ့သည်။
ထိုနေ့ကား ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်ဟု ဝတ်ရည်က အမှတ်တရ ပြန်ပြောင်း သတိရနေမိသည်။ ပထမတော့ ကြောက်၍ ဆန္ဒပြလူအုပ်နှင့် ဝေးဝေးတွင် သူနေ နေခဲ့သေးသည်။ ဆန္ဒပြပွဲ အရှိန်ရလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များ အရိုက်အနှက် ခံကြရသည်ဟူသော သတင်းများကို ကြားလာရသည်နှင့်အမျှ ဝတ်ရည်၏ ကြောက်စိတ်များလည်း ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်တော့သည်။
“ကျမလဲ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး၊ လမ်းပေါ်က လူထုနဲ့သာ အတူရှိနေချင်တော့တာ၊ သံဃာတော်တွေ နဲ့သာ အတူ ရှိနေချင်တော့တာ” ဟု အသက် ၂၇ နှစ်ရွယ် မန်နေဂျာမလေး ဝတ်ရည်က ပြောပါသည်။
နာရီဝက်မျှပင်မကြာ၊ ဝတ်ရည်လည်း လမ်းပေါ်မှ ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးထဲတွင် ပါဝင် ချီတက်နေမိတော့သည်။ လက်နက်ကိုင် စစ်သားများက သူတို့သွားမည့် လမ်းပေါ်တွင် သံဆူးကြိုးခွေများဖြင့် အတားအဆီး အဟန့်အတားများ ပြုလုပ်ထားကြသည်။
သူနှင့်အတူ ဆန္ဒပြနေသောလူထုကြီး နောက်နာရီပိုင်းအတွင်း ဘာဖြစ်မည်ဆိုသည်ကို မသိ။ သူဤဆန္ဒပြပွဲ ကြီးတွင် ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမှာ လူထုကို အညှာတာကင်းမဲ့စွာ ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်နေသော စစ်သားများကို စိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်လွန်း၍သာ ပါလာမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းတွင် ဤဆန္ဒပြပွဲကြီးက ပြည်သူလူထု နိစ္စဓူဝကြုံတွေ့နေရသော ဒုက္ခများမှ တစုံတရာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လိုဖြစ်ငြား မျှော်လင့်ချက်ကလည်း ရှိနေသည်။
“ကျမ နိုင်ငံရေးအကြောင်း သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စစ်သားတွေက ဘုန်းကြီးတွေကို ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကြားရတော့ အရမ်း ဒေါသထွက်တယ်။ ပြည်သူတွေ ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေက သက်သာရာရမဲ့ အပြောင်းအလဲလေး တခုခုလဲ လိုချင်တယ်” ဟု ဝတ်ရည်က ရှင်းပြသည်။
သို့သော် သူ၏အိပ်မက်နှင့် မျှော်လင့်ချက်က ကြာကြာမခံပါ။ စစ်သားများက လူအုပ်ထဲကို ချိန်ရွယ် ပစ်ခတ်တော့သည်။ ဝတ်ရည်လည်းလူအုပ်နှင့်အတူ ရော၍ ပြေးနေရတော့သည်။ ဘယ်ဆီကို ဦးတည်ပြေးနေမိမှန်းလဲ မသိ။
အစောပိုင်းက ရှိခဲ့သော ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုများ သူ့ထံတဖန် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာပြန်သည်။ မတော်မတရား လုပ်ခဲ့သည့် စစ်သားများကို လက်စားချေလိုခြင်းနှင့် အပြောင်းအလဲအတွက် မျှော်လင့်ချက်တည်းဟူသော သူ၏ မျှော်လင့်ချက်မှန်သမျှလည်း အားလုံး ဆုံးရှုံးသွားပြန်သည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ကုမ္ပဏီတခု၏ မန်နေဂျာအဖြစ် ဝတ်ရည်ရသောလစာမှာ အတော်လေး ကောင်းပါသည်။ တလလျှင် ကျပ် တသိန်း (ဒေါ်လာ ၈ဝ ခန့်) ရသည်။ ဤလခမှာ ဗမာပြည်တွင် ရှားရှားပါးပါးရသော လစာကောင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ အလုပ်သမားအများစုအတွက် ပျှမ်းမျှလစာမှာ တလလျှင် ကျပ် ၂၅ဝဝဝ မှ ၅ သောင်းကြားသာ ရှိသည်။
သို့သော် ထိုကောင်းလှပါသည်ဆိုသော လစာပင်လျှင် မိုးထိအောင် ထိုးတက်နေသော ကုန်ဈေးနှုံးများကြောင့် သူမအပါ အဝင် မိသားစု ၆ ယောက်အတွက် လောက်ငရုံမျှသာ ရှိသည်ဟု ဝတ်ရည်က ဆိုသည်။
“အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအလုပ် လုပ်နေတဲ့ တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ကျမ လစာက အတော်လေး ကောင်းတာပေါ့ရှင်၊ ဒါပေမဲ့လဲ မလောက်ပါဘူး” ဟု ဝတ်ရည်က ရှင်းပြပါသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လလယ်က လောင်စာဈေးနှုံးများ မြှင့်တင်လိုက်မှုကြောင့် သူတို့ရုံးရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံး အတော်လေး ထိခိုက်ခဲ့ရကြောင်း၊ ရုံးသွားစရိတ်အတွက် အပိုငွေများ ကုန်ကျကြရကြောင်း၊ “စားဖြစ် နေဖြစ်ရုံဘဝကနေ ဓားပြ ထပ်အတိုက်ခံလိုက်ရသလို ပါဘဲရှင်” ဟု သူမက ပြောပါသည်။
ဤနောက်ခံအကြောင်း အချက်အောက်တွင် သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွါးလာသည့်အခါ သူ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။ လူထု၏ဘဝကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတရပ်အဖြစ် သူမက ရှုမြင်ခဲ့သည်။
“ကျမက အစိုးရကို ဖြုတ်ချဘို့အထိ တွေးထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမတို့ နေရထိုင်ရတာလေးများ နဲနဲအပြောင်းအလဲ ဖြစ်မလားလို့ ဆန္ဒပြပွဲတွေအပေါ် မျှော်လင့်ခဲ့မိတာပါ” ဟု ဝတ်ရည်က ဆိုသည်။
သို့သော် သေနတ်ပစ်သံများကြားရပြီး လမ်းများပေါ်တွင် သွေးထွက်သံယို ဖြစ်ပွါးမှုများကို တွေ့လာရသည့်အခါ သူမ၏ ကြောက်ရွံ့စိတ်များ တဖန် ပြန်ပေါ်လာပြန်သည်၊ အပြောင်းအလဲလေးများ ဖြစ်မလားဟူသော မျှော်လင့်ချက်ကလေးလည်း ကွယ်ပျောက်သွားပြန်သည်။
“လမ်းပေါ်မှာ သေနတ်သံတွေကြားရ၊ သွေးထွက်သံယိုတွေ မြင်ရတော့ ကျမ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေလဲ အကုန်ကုန်တာပါဘဲ။ ကျမလဲ ရုံးဘက်ကို အတင်းပြန်ပြေးလာခဲ့တာ။ သူတို့တွေ ဒီလောက်အထိ ယုတ်မာပက်စက်လိမ့်မယ်လို့ တခါမှကျမ မတွေးခဲ့မိဘူး” ဟု ဝတ်ရည်က ပြောသည်။
သို့သော် ဤသို့ ဖြစ်ရသည်မှာ ဝတ်ရည် တဦးတည်း မဟုတ်ပါ။ သူ့တွင်ရှိနေသော ကြောက်ရွံ့မှုများ၊ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့မှုများသည် စစ်အာဏာရှင်များ နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော် အုပ်စိုးခဲ့သော မြန်မာပြည်ရှိ လူအတော်များများထံတွင် ရှိနေသည်။
ဝတ်ရည်လိုပင် မျှော်လင့်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်အပြည့်ဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်က ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့မှ လူငယ်တဦးကလည်း “လမ်းမပေါ်မှာ ဆန္ဒပြသံဃာတွေကို ဖူးလိုက်ရတော့ ကျနော် စိတ်အရမ်း လှုပ်ရှားသွားပြီး ဆန္ဒပြပွဲထဲမှာ တကယ့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဝင်ပါခဲ့တာ” ဟု သူ့အမြင်ကို ပြောပြသွားပါသည်။
“ဒါပေမဲ့အစိုးရက သံဃာတော်တွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို သေနတ်နဲ့လဲ စပစ်ရော၊ ကျနော်လဲ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘဲ စစ်အစိုးရ သူလျှိုတွေလက်က လွတ်အောင် ပြေးရတော့တာဘဲ၊ သူတို့က ခုထိကျနော့်ကို လိုက်ရှာနေတုန်း။”
“ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး” ဟု ခေါ်ကြသည့် လွန်ခဲ့သောနှစ် စက်တင်ဘာက ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ဆန္ဒပြပွဲများသည် စစ်သားများက ဆန္ဒပြသမားများကို မဲမဲမြင်ရာ အကုန်ပစ်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်း၊ အိမ်များ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို မြင်မြင်သမျှ ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ သံဃာတော်များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီးသွားခြင်းကြောင့်၎င်း မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရပုံ ရပါသည်။ သို့သော် ဤလှုပ်ရှားမှုကို အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားအတွင်းမှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် လူထုကြီး တရပ်လုံးက ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
မန္တလေးမြို့ ရယက ရုံးမှ အတွင်းရေးမှူး အမျိုးသမီးက ပြောသည်မှာ သံဃာတော်များ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြသည်ကို ကြားသောအခါ သူမနှင့် သူမ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အားလုံး လူမသိသူမသိ အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရကြောင်း၊ ဤဆန္ဒပြပွဲကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထောက်ခံလို့ မရသော်လည်း သူတို့ဘဝတွေအတွက် အပြောင်းအလဲလေးများ ဖြစ်လာမလားဟု မျှော်လင့်မိခဲ့ကြောင်း ပြောသွားပါသည်။
“ဆန္ဒပြပွဲတွေက ကျမတို့ အားလုံးအတွက် အလှည့်အပြောင်းတခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊ ကျမတို့ဘဝတွေကို ပြောင်းလဲ ပေးလိမ့်မယ်လို့ ကျမတို့ အားလုံးက မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာဘဲ” ဟု သူမက ပြောသွားပါသည်။
ရယက ရုံးအတွင်းရေးမှူး အနေဖြင့် သူမလစာ တလလျှင် ကျပ် ၂၅ဝဝဝ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ဝ လျော့လျော့) ရသည်။ ဤငွေဖြင့် သူမနှင့် သူမ၏ ၅ နှစ်ရွယ်ကလေးတို့ မစားလောက်ပါ။
“ကျမတို့က ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ဝင်ပါလို့မရဘူး၊ ဒါပေမဲ့ လူတွေ ချီတက် ဆန္ဒပြနေတာကြားရတော့ အရမ်းပျော်တယ်၊ အခြေအနေတွေတော့ ကောင်းလာတော့မှာဘဲလို့ မျှော်လင့်မိခဲ့ကြတာ” ဟု သူမက ပြောသွားပါသည်။
အလားတူ ရန်ကုန်မြို့ မြို့နယ်အဆင့် ရဲစခန်းတခု၏ တပ်ဖွဲ့မှူးကလည်း သူ့ကို ဆန္ဒပြသူများကို ဖြိုခွဲရန် နှင့် လုံခြုံရေးတာ ဝန်ယူရန် တာဝန်ပေးထားသော်လည်း ဆန္ဒပြပွဲများက အပြောင်းအလဲတခုခု ဖြစ်လာပါစေဟု စိတ်ထဲက ကြိတ်၍ ဆုတောင်းနေခဲ့မိကြောင်း ပြောပါသည်။
“ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေက အပြောင်းအလဲ ဘာမှဖြစ်မလာတာတော့ ဝမ်းနည်းစရာဘဲ။ တာဝန်အရ ကျနော်က ဆန္ဒပြသမားတွေကို ဖြိုခွဲရမဲ့သူ၊ လူထုရဲ့ ဒုက္ခတွေအတွက် သံဃာတော်တွေက အော်ဟစ် ဆန္ဒပြနေတာ ကြားရတော့ ကျနော်အား တက်တယ်” ဟု အဆိုပါ ရဲအရာရှိက ပြောသွားသည်။
အစိုးရဝန်ထမ်း တယောက်အနေနဲ့ သူ့မိသားစုကို ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးဘို့ တရားမဝင် ရရှိနိုင်သည့် ဒုတိယ၊ တတိယ အပိုဝင်ငွေများ ရှိကြောင်း၊ ထိုဝင်ငွေများဖြင့် မိသားစုကို အလွယ်တကူပင် ဝလင်အောင် ထားနိုင်ကြောင်း၊ သူ့ကလေးများ၏ အနာဂါတ်အတွက်မူ ပူပန်မိကြောင်း ထိုအရာရှိက ဆက်လက်ပြောသည်။
“ကျနော့်ကလေးတွေကလဲ အတူတူပါဘဲ၊ ဒီစနစ်အောက်မှာ သူတို့အတွက် ဘာအနာဂါတ်မှ မရှိပါဘူး” ဟု ထိုရဲအရာရှိက တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြိတ်၍ ပြောသွားသည်။
ပိုဆိုးလာတဲ့ အားမလိုအားမရ ဖြစ်မှုများ
အိမ်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို ဝင်ရောက်စီးနင်း၍ အဓိကကျသော သံဃာတော်များနှင့် လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ များကို ဖမ်းဆီးခြင်းနည်းဖြင့် ဆန္ဒပြသူများကို အောင်မြင်စွာ နှိမ်နင်း လိုက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရ၏ စီးပွါးရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်နေသည့် လူထုကြား ပိုဆိုးလာနေသော မချင့်မရဲ ဖြစ်မှုများကိုမူ မြန်မာစစ်အစိုးရ မနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပါ။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Macquarie University စီးပွါးရေးဌာနမှ တွဲဘက်ပါမောက္ခ ရှောင်တားနဲလ် (Sean Turnell) ကမူ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေး အခြေအနေသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွါးချိန်ကထက် ပိုမိုဆိုးရွားနေကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် မေလအတွင်း နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီးတွင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားပါသည်။
“ဒီနေ့ ဗမာပြည်က သာမန်လူထု ကြုံနေရတဲ့ အခြေအနေက မနှစ်က လူတွေ လမ်းပေါ်ထွက်လာ ဆန္ဒပြကြတဲ့ အခြေအနေတုံးကထက် အများကြီး ဆိုးတယ်” ဟု တားနဲလ် က မဇ္ဈိမကို ပြောသွားပါသည်။
မေလ ၂ ရက် နှင့် ၃ ရက်နေ့များက နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်အပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာ ဒေသကြီးဖြစ်သော ဧရာဝတီတိုင်းမှာ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ အစိုးရက ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ထိထိရောက်ရောက် အချိန်မီ မလုပ်နိုင်လျှင် တိုင်းပြည်တွင်းတွင် သိပ်မကြာခင် အကြီးအကျယ် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မှုကြီးနှင့် ကြုံရနိုင်သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
ယခင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်ကောင်းလေးတခု ရထားခဲ့သည့် ဝတ်ရည်ကလည်း ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ဆန္ဒပြပွဲများ ပြီးကတည်းက သူတို့လုပ်ငန်းမှာ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းလုနီးပါး ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ မေလအတွင်းကျ ရောက်ခဲ့သည့် သဘာဝကပ်ဘေးကြီး အပြီးတွင် ပိုဆိုးသွားကြောင်း ပြောသွားပါသည်။
“ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက လည်စရာပတ်စရာ ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံလို့ မမြင်ကြတော့ဘူး၊ အဲဒီတော့ ခရီးသွား ကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်တွေ ပြုတ်ကုန်ကြတာ” ဟု ခရီးသွားကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာအလုပ်မှ ထွက်ကာ သတင်းထောက် တဦးဖြစ်လာခဲ့သည့် ဝတ်ရည်က ပြောသည်။
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်နှင့် ဧည့်သည်အဝင် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့် မန္တလေးမြို့ရှိ နာမည်ကြီး ဆီဒိုနား ဟိုတယ်တွင် အလုပ်သမား ၄ဝ% အထိ လျှော့ချခဲ့ရကြောင်းဖြင့် အဆိုပါ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်မှ ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောပါသည်။
“ဧည့်သည် အဝင်နည်းသွားလို့ အလုပ်သမား ၅ဝ လောက် လျှော့လိုက်တာ” ဟု မန္တလေး ဆီဒိုနားဟိုတယ် ဝန်ထမ်းတဦးက ဇွန်လအတွင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
အလားတူပင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော် ပင်လယ်ကမ်းခြေ အပန်းဖြေစခန်း ၃ ခုဖြစ်သော ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင် နှင့် ငပလီတို့တွင်လည်း ကြောက်မက်ဘွယ် မုန်တိုင်းကပ်ဆိုးကြီး ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်သွားအပြီး ၄ လ ကျော် ပိတ်ထားခဲ့ရသည်။
“စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေ မကောင်းတော့ လူငယ်တွေအတွက်လည်း ဗမာပြည်မှာ အလုပ်ရှာရတာ ခက်ခဲလာတယ်” ဟု ဝတ်ရည်က သူ့အမြင်ကို ဆက်လက်ပြောပြသည်။
“ဒီတော့ လူငယ်တွေအတွက်က နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး ရရာ အလုပ်လုပ်ဘို့ဘဲ ကျန်တော့တယ်” ဟု သူမက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ် စက်တင်ဘာလက ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများ မဖြစ်ပွါးရအောင် စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အဓိက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခြင်းစသည်ဖြင့် ကြိုးပန်း ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း လူထု၏ စစ်အစိုးရကို ခုခံဆန့်ကျင်လိုသည့် စိတ်ကိုမူ နှိမ်နင်း၍မရခဲ့ပါ။
လူထုအနေဖြင့် လမ်းပေါ်သို့ထွက်၍ ဆန္ဒမပြရဲသေးပုံ မရသော်လည်း၊ လူထု၏ ဒေါသနှင့် ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်လိုစိတ်မှာမူ ငြိမ်သက်မသွားသေးပါ။ သူတို့နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများကြောင့် ပို၍ပင် ဆိုးလာသေးသည်ဟု မန္တလေးမြို့ ရယက ရုံးမှ အတွင်းရေးမှူးက ပြောသည်။
“လူတွေက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မိုးထိုးနေတဲ့ ကုန်ဈေးနှုံးနဲ့အမီ လိုက်နိုင်အောင် လုပ်နေရတာ၊ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရုံ လုပ်ဘို့ကို ပိုပိုပြီး ခက်လာနေတာ” ဟု သူမက ပြောသွားပါသည်။
“အစိုးရက အခြေအနေတွေ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်နေပါပြီလို့ပြောရင်၊ လူတွေရဲ့ဒေါသက သူတို့ဘက် လှည့်သွားတာတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပြောလို့ သူတို့ ပျော်နေတယ်၊ စိတ်ချမ်သားနေတယ် ပြောလို့လဲ မရပြန်ဘူး။ အသက်ရှင်နေနိုင်ရုံ လုပ်နေရတာနဲ့ကို လူထုမှာ အဲဒီထဲနစ်နေပြီ၊ သူတို့ဒေါသတွေကို မျိုသိပ်ထားလိုက်ရတော့တာ” ဟု သူမက ဆက်လက်ပြောသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကျောင်းသားဟောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ယခုမြန်မာ့အရေး လေ့လာသူ လုပ်နေသည့် ကိုအောင်သူငြိမ်း ကမူ အဓိကကျသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဖမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် နောက်ထပ်ဆန္ဒပြပွဲများ တကျော့ပြန်ဖြစ်လာမည် အစိုးရအနေဖြင့် တားဆီးလိုက်နိုင်သော်လည်း လူထုအနေဖြင့် သူတို့ရထားသော စိတ်ဒဏ်ရာ အနာတရများမှာမူ မကျက်သေးပါ ဟု ဆိုသည်။
“လူထုက လက်ရှိစနစ်ကို သည်းခံနိုင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်အချိန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သာမသိတာ၊ ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာဘဲ။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ဖို့ ခေါင်းဆောင်က အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ တခါတရံကျတော့ လှုပ်ရှားမှုကဘဲ ခေါင်းဆောင်ကို မွေးထုတ်ပေးသွားတာ” ဟု ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်တွင် အခြေစိုက် လုပ်ကိုင်နေသော ကိုအောင်သူငြိမ်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် သာမန်အရပ်သားများ အပါအဝင် ပြည်သူလူထုနှင့် ယခုအခါ ပြောဆို ဆက်ဆံနေရပြီဖြစ်သည့် ဝတ်ရည်ကလည်း ပြည်သူလူထု၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကို အစိုးရက ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် နောက်ထပ် ဆန္ဒပြပွဲများသည် မကြာမီတွင်ပင် ဖြစ်လာတော့မည်ဟု ပြောသည်။
“နောက်တခါထပ်ပေါ်လာမဲ့ ဆန္ဒပြပွဲက အားလဲပိုကြီးမယ်၊ အရှိန်အဟုန်လဲ ပိုကြီးမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူထုရဲ့ဒုက္ခက ပိုပိုပြီး ဆိုးလာနေတယ်၊ ဒါကို အစိုးရက ဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့ အဖြေလဲရှိပုံ မရလို့ဘဲ” ဟု ယခုအခါတွင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းအတွက် သူမျှော်မှန်းတောင့်တနေသော အိပ်မက်တခု ရှိနေပြီဖြစ်သည့် ဝတ်ရည်က ရော်ရမ်းမှန်းဆ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 18 2008 16:50 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အမေရိကန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ ချီးမြှင့်သော လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူဆု ရရှိခဲ့သူ ကိုဘိုကြည်သည် ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှုမှ နိုင်ငံရေး လောကတွင်း ၀င်ရောက်လာပြီး စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ တတိယအကြိမ် ဖမ်းဆီးခံရမည့်ဆဲဆဲတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) (AAPP-B) ကို တည်ထောင်ရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အဖြေတခုမဟုတ်ဟု ယူဆထားသော သူ့ကို မဇ္ဈိမသတင်းဌာနမှ ထွန်းထွန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
Human Rights Defender Awards ဆု ချီးမြှင့်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး ခံစားရပါလဲ။
ဒီဆုကို ပေးတာ ကျနော်တယောက်တည်းကို ပေးတာလို့ ကျွန်တော် မယူဆဘူး။ တကယ် တမ်းကျတော့ ဒီဆုကို ပေးတယ်ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သူတွေကို ရည်စူးပြီး ပေးတာလို့ ယူဆတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ့လူတွေက ကံဆိုးစွာပဲ အကျဉ်းထောင်တွေထဲ ရောက်နေတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ လွတ်လပ်မှု မရှိတဲ့အခါကျတော့ ဒီလူတွေကို တိုက်ရိုက်ပေးဖို့၊ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော့်ကို ပေးတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပဲ ယူဆပါတယ်။
အခြားရထားတဲ့ ဆုတွေများ ရှိပါသေးလား။
ဆုကတော့ အရင်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်က နယ်သာလန် AI က ဂုဏ်ထူးဆောင် ကတ်ပြား လေးတစ်ခု ပေးဖူးတာ ရှိတယ်။ နောက်ပြီး မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် အစိုးရကနေ လူ့အခွင့်အရေးကို စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးဖူးတယ်။ ဒါပဲရှိပါတယ်။
အခု (AAPP-B) အသင်းကို တည်ထောင်ခဲ့ပုံအကျဉ်းလေးနဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကများ ထောက်ပံ့ထားတာလဲဆိုတာ လေး သိခွင့်ရနိုင်မလား။
ကျနော်တို့က ၂၀၀၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ စပြီး တည်ထောင်တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေ အကုန်လုံးက နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရဖူး၊ ထောင်ကျဖူးတဲ့သူတွေပေါ့။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားဟောင်းတွေပေါ့။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေနဲ့ စပြီး တည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့။ စပြီး ထူထောင်ပြီးကတည်းကနေ မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်တွေကို စောင့်ကြည့်တာ၊ နိုင်ငံသား အကျဉ်းသားတွေရဲ့ စာရင်း အချက်အလက်တွေကို ကောက်ယူတာ၊ နောက် ကုလသမဂ္ဂမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လော်ဘီလုပ်တာတွေ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့သိချင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေ၊ နောက် အခြား မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေ၊ နောက် သူတို့ မသိတာတွေကို ပြောပြတာပေါ့။
၈၈ နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေထဲက အထင်ကရ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ပြောပေးနိုင်ပါမလား။
အဲဒီအကြောင်းကတော့ ၁၉၈၈ ခု၊ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့။ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မနက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အထက ၂ ကျောင်းနားမှဖြစ်တဲ့ သပိတ်တိုက်ပွဲလေးပါ။ အဲဒီ့ သပိတ်တိုက်ပွဲမှာ အစ်ကိုတို့ သပိတ်စစ်ကြောင်းကို စစ်တပ်က တားတယ်။ တားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိဖို့ ရှေ့ကို သွားတယ်။ အဲဒီလိုသွားတဲ့အချိန်မှာ သူ့တို့ဘက်ကနေ အညှိမခံဘဲ စပြီးတော့ပစ်တယ်။ အဲဒီလို ပစ်တဲ့အခါမှာ အလံကိုင်ထားတဲ့ သိန်းကျော်တိုးဆိုတဲ့ ကိုးတန်းကျောင်းသားလေး သေဆုံးသွားတယ်။ သေနတ်မှန်ပြီးတော့ ပွဲချင်းပြီး သေသွားတယ်။ အလားတူပဲ တခြား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သုံး၊ လေး၊ ငါးယောက်လောက်က အဲဒီမှာတင် သေနတ်မှန်ပြီး ဒဏ်ရာတွေ ရသွားကြတယ်။ အဲဒီ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ မနက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ကျွန်တော် မေ့လို့မရတော့ပါဘူး။
ချုပ်နှောင်ခံစဉ်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စာကို ထောင်ထဲမှာ သင်ရတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီ့အတွေ့အကြုံ လေးကို ပြောပြပေးပါလား။ နောက်ပြီး မြန်မာစာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘာ ကြောင့်သင်ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။
ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်က ၁၉၈၈ ခုနှစ် လှုပ်ရှားမှုအရေးတော်ပုံကာလအတွင်းမှာပေါ့။ နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ သံတမန်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာမျိုး တွေရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်ဘူး။ သံတမန်တွေ၊ သတင်းထောက်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်ဆံတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လှုပ်ရှား နေတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်နဲ့ သဘောထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့ သူတို့နဲ့ တွေ့ခါနီးမှာ စကားပြန်ကို တော်တော်လေး လိုက်ရှာရတယ်။ လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာ ယုံကြည် ရမယ့်စကားပြန်ကိုလည်း ရွေးချယ်ရတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ကျွန်တော် ဘာခံစားရလဲဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလောက်အထိ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ သံတမန်တွေနဲ့ကို ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောလို့မရတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေဖြစ် လာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်မိ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကာလကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီလိုလေ့လာဖို့ အချိန်မရခဲ့ဘူး။ ထောင်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော့်မှာ အချိန်တွေ တော်တော်များများ ရသွားတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ၂၄ နာရီမှာ ၂၃ နာရီနဲ့ မိနစ် ၄၀ က ကျွန်တော် တိုက်ခန်းထဲမှာ နေရတာ။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်စာကို ဆက်ပြီးတော့ လေ့လာရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ လေ့လာမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက် တယ်။ နောက်ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုပြီး ကျွန်တော် လိုက်စဉ်းစားတယ်။ ထောင်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းက စာအုပ်၊ စာတမ်း တွေ သွင်းလို့မရဘူး။ တခြားစာတွေ ဖတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့လူတွေက ဥပမာ ဒေါက်တာအေးချမ်းပေါ့။ အခု ဂျပန်မှာရှိနေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမှာ ဧည့်ပါမောက္ခ ပြန်လုပ်နေတယ်။ သူက ကျွန်တော်တို့ကို ရေချိုးဆင်း တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀န်ထမ်းတွေ ရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ကြောင်းစ၊ နှစ်ကြောင်းစ အခွင့်အရေးရရင် ရသလို သူ ပြောတယ်။ နောက် ကျွန်တော် မန္တလေးကိုပြောင်း သွားအခါကျတော့လည်း ထောင်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာကျူရှင်ဆရာတစ် ယောက်နဲ့ အတူတူ နေရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူက အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံကနေပြီး ပြန် သင်ပေးတယ်။ အဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွန်တော် ထောင်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာ တော်တော်လုပ်ဖြစ်သွား တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခု အစားအသောက်ပြန်လက်ခံလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်လေးကို သိ ပါရစေ။ နောက်ပြီး ဒါဟာ ဘယ်ကိုများ ဦးတည်လဲလို့များ ထင်ပါသလဲ။
ဒေါ်စုက သူရဲ့ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးပေါ့နော်။ အခွင့်အရေးတစုံတရာအတွက်ကို နအဖဆီက နေ တောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ နောက် အခုပြန်လက်ခံတဲ့နေရာမှာ သူ တောင်းဆိုတာရသွားလို့ ပြန်လက်ခံတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက သူကိုယ်တိုင်ကလည်း နအဖနဲ့ တွေ့ချင်တယ်လို့ စကားပြောထားတာ ရှိတယ်ဆိုတော့ အဖြေတော့ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ ကြားထဲမှာတော့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေ ဒီရက်ပိုင်း၊ လပိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်လာနိုင်စရာတွေ ရှိတယ် ထင်တယ်။ ဒီ ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စုနဲ့ တွေ့ဆုံမယ့်ပွဲက အဖြေရမယ့်ပွဲတစ်ခုလုိ့ တော့ ကျွန်တော် မထင်ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့များ အဖြေရနိုင်မယ့်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မြင်မိတာပါလဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဦးအောင်ကြည်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသန်းရွှေကြားထဲမှာ ကူးလူး ဆက်ဆံပေးနေရတဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။။ သူ့က ဆုံးဖြတ်ခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်တမ်းပြဿနာတွေကို ပြေလည်ချင်တယ်ဆိုရင် တကယ့်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အာဏာရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သေသေချာချာ တရားဝင် တွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့မှာပဲ အဆုံးအဖြတ်တွေ၊ အဖြေတွေ ရလာနိုင်မယ့် ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်လာမယ်။
အခု ၂၀၁၀ မှာကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိအောင်ဆိုပြီး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တွေကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာလို့ တချို့က ပြောကြတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကို့ရဲ့ အမြင်လေး သိပါရစေ။
သေချာတာကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အဖြေတစ်ခု မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာတွေကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရဘူး။ သူတို့ အတင်း အကျပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း အမည်ခံ အရပ်သား၊ သူတို့စိတ်တိုင်းကျ အရပ်သား အစိုးရ အမည်ခံ စစ်အစိုးဘဲ ဖြစ်မှာဆိုတော့ ဒါဟာ အဖြေမဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တကယ့် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ပြန်မရနိုင်ဘူး။ နောက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရပ်တန့် သွားခြင်း မရှိနိုင်ဘူး။ သေချာတယ်ဗျာ။ ၂၀၁၀ ဟာ အဖြေတစ်ခု လုံးဝမဟုတ်နိုင်ဘူး။
အခုနောက်ပိုင်း သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို ထောင်ခဏခဏပြောင်းတာနဲ့ ထောင် တွင်းနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့သတင်းအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ ဒါကိုဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းသွားဖို့ စိတ်ကူးထားပါလဲ။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ထောင်တွေရဲ့အခြေအနေကို သေသေချာချာစောင့်ကြည့်။ ပြီးတော့ ဒီဟာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲက ပြည်သူတွေ သိအောင်၊ နောက် နအဖ အစိုးရ အထက်ပိုင်းလူတွေကလဲ သိအောင်၊ နောက်... နိုင်ငံတကာ အစိုးရအဖွဲ့တွေ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေ သိအောင် ကြိုးစားပြီးတော့ တရားလွန်နှိပ်စက်မှုတွေ ပပျောက်အောင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းကကော၊ ပြည်သူလူထုကကော ၀ိုင်းပြီးဖိအားပေးလာအောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဒီလူတွေအားလုံးကို လွတ်သွားအောင်တော့ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒီလူတွေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်၊ ဒီလို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့အတွက် အားလုံးပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြမှပဲရမှာ။ နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအားလုံး လွတ်မြောက်ရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲရဲ့ ပင်မအဆင့် အခြေခံဖြစ် တယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အကုန်မလွတ်ဘဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ကူး ပြောင်းနေပြီလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အဲဒီလိုဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းဖို့ဆိုတာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်တယ်လို့ ပြောချင်တာပါလား။
အထူးသဖြင့် ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်သဘောက ဘာကို ပြသလဲ ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘူးဆိုတာ ပြတာ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဘဲနဲ့ တိုးတက်တဲ့၊ ခေတ်မီတဲ့၊ တည်ငြိမ်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ မတည်ဆောက် နိုင်ဘူး။ အဲဒီလို တရားဥပေဒစိုးမိုးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်က တကယ့်ကို မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှုတွေ ရှိရမယ်။ နောက်ပြီး တရားသူကြီးတွေကလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပြည့်ရှိရမယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ တရားစီရင်ရေးအာဏာက တခြားစီ ဖြစ်နေရမယ်။ အဲဒီလို အာဏာခွဲဝေမှုတွေ မရှိဘဲနဲ့ တကယ့်ကို တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခု မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အခု နောက်ထပ်ပြီး ပြည်သူတွေကို ဘာများ ပြောချင်ပါသေးလဲ။
တိုင်းပြည်တစ်ခု အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာက ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးလူ တန်းစားနှစ်ခုတည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရဘူး။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ မတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရတွေကို ပျော့ပြောင်းလာအောင်၊ စေ့စပ် ဆွေးနွေးလာအောင်၊ နောက် အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ အဲဒီလိုပဲ လုပ်သွားမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လိုပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့ဆိုရင်လဲ အဲဒီလိုပဲ။ နောက် ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်က လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်ခံနေရရင် ချိုးဖောက်ခံရပါတယ်လို့ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ပြောဖို့။ အဲဒီလို ပြောတော့မှ ကျန်တဲ့လူတွေက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာတွေကို တွေ့လာပြီဆိုရင် အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့အတွက် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေ ရပ်တန့်ဖုိ့ လုပ်ရမယ်ဆိုပြီး ပြောနိုင်မယ်။ ဒါက တကယ့်ကို လုပ်ရမယ့်အလုပ်။ ဒါတွေကို လုပ်မယ်ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ လျော့ပါးသွားနိုင်တယ်။
ကြာသပတေးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 18 2008 15:13 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။နောက်တကြိမ် လူထုအုံကြွမှုကြီး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်အစိုးရသည် လုံခြုံရေး အစီအမံများကို တိုးမြှင့် ပြုလုပ်နေသည်။ ရယက ရုံးများတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ညအိပ်စောင့်ခိုင်းနေသည်ဟု သတင်း ရပ်ကွက်များအဆိုအရ သိရသည်။
မြန်မာပြည်၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး မြို့တော်ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့ရှိ မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (TDPC) ရုံးတရုံးမှ အတွင်းရေးမှူးတဦးက ယခု စက်တင်ဘာ လဆန်းပိုင်းမှ စတင်၍ ရယက ရုံးတိုင်းတွင် အနည်းဆုံးရဲတပ်ဖွင့်ဝင် ၂ ဦးကို တာဝန်ချ ညအိပ်စောင့်ခိုင်းနေသည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျမတို့မြို့နယ်မှာ ရယက ရုံး ၇ ရုံးရှိတယ်။ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်ကစပြီးတော့ အဲဒီရုံးတိုင်းမှာ အနည်းဆုံးရဲတပ် ဖွဲ့ဝင် ၂ ယောက်စောင့်အိပ်ရတယ်” ဟု အဆိုပါ အမျိုးသမီး အတွင်းရေးမှူးက စနေနေ့က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
စက်တင်ဘာတလလုံး ထိုသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုနေရမည်ဟု သူတို့ရုံးမှ သူနှင့် သူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အားလုံးကို ပြောဆိုထားသည်ဟု အရေးယူခံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ရ၍ အမည်မဖေါ်လိုသူ မယက အတွင်းရေးမှူးက ပြောသည်။
“သူတို့ (အစိုးရ)က ဘာကို စိုးရိမ်နေတယ် ဆိုတာတော့မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ လူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို သေချာ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ ကျမတို့ အားလုံးကို မှာထားတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲ တခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲ ပါတဲ့သူတွေ အားလုံးကို အကုန် မှတ်တမ်းတင်ဖို့လဲ ပြောထားတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ထိုအတောအတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ တဦးကလည်း ရပ်ကွက် အေးချမ်းသာယာရေးရုံး (ရယက) များတွင် သူ့တပ်ဖွဲ့မှ အငယ်တန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပုံမှန် စောင့်အိပ်ခိုင်းထားကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုသွားခဲ့ပါ သည်။
“ရယက ရုံးတွေမှာ အနည်းဆုံးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ယောက်ကနေ ၄ ယောက်လောက် ရှိနေအောင် စီစဉ်ပေးရတယ်။ ဒါမှ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု တခုခုဖြစ်လာရင် သူတို့ကို အလွယ်တကူ ထုတ်သုံးလို့ရမှာ” ဟု အဆိုပါအရာရှိက ရှင်းလင်းပြောပြသည်။
အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက် ဘာဆိုသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသော်လည်း စက်တင်ဘာတလလုံး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် သတိဝီရိယနှင့်နေရန် သူ့ကို ညွှန်ကြားထားသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ အဆိုပါအရာရှိက ပြောသည်။
“ကျနော်ထင်တာ ဒီစက်တင်ဘာလထဲမှာ နောက်ထပ် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ထပ်ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ ထင်တာဘဲ” ဟု ထိုအရာရှိက ရှင်းပြသည်။
ပုံမှန် ညနက်သန်းခေါင်ကျော်အထိ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချလေ့ရှိသော ရန်ကုန်မြို့မှ ဈေးဆိုင်၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအား ၁၁ နာရီအထိသာ နောက်ဆုံးထား ရောင်းချရန် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက ယခုလဆန်းပိုင်းက လာရောက် အကြောင်းကြားသည်ဟု သိရပါသည်။ ၁၁ နာရီ နောက်ပိုင်း ဆိုင်များ ဆက်လက် မဖွင့်လှစ်ရန်၊ ပိတ်ရန် ပြောသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤအမိန့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာဏာပိုင်များက အကြောင်းပြချက် တစုံတရာ ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်း မပြုသော်လည်း ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းက ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ဆန္ဒပြပွဲမျိုး နောက်တကြိမ် ပြန်လည် ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို စိုးရိမ်၍ ပိတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်မည်ဟု အဆိုပါ ဆိုင်ရှင်များက ယုံကြည်နေကြသည်။
မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း ပခုက္ကူမြို့တွင် မေတ္တာသုတ်ရွတ်၍ အေးချမ်းစွာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော သံဃာတော်များကို မတော်မတရား နှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခဲ့သည့်အတွက် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တနိုင်ငံလုံး စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ကြရန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များက ကြေငြာခဲ့သည်။
ဤသို့ သံဃာတော်များအပေါ် မတော်မတရား ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းအတွက် လူသိရှင်ကြား တောင်းပန်ရန် စစ်အစိုးရကို သံဃာတော်များက တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ စစ်အစိုးရက ဤသို့လူသိရှင်ကြား တောင်းပန်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်အခါ သူတို့၏ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ခြင်းကို တဆင့်တိုးမြှင့်၍ ပြည်သူတရပ်လုံးကိုလည်း ဤပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ချီတက်လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြပွဲများကို မြန်မာပြည်သူလူထု ထောင်ပေါင်းများစွာက ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။ ယခင်မြို့တော်ဟောင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်မူ သောင်းနှင့်ချီသော လူအုပ်ကြီးက လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်ကာ ကုန်ဈေးနှုံး ကျဆင်းရေး၊ လောင်စာဆီ ဈေးနှုံး ကျဆင်းရေး နှင့် စစ်အစိုးရက လူသိရှင်ကြား တောင်းပန်ရေးတို့အတွက် ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
မကြာမီပင် အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲများသည် နိုင်ငံရေးအရ အလှည့်အပြောင်းတခု ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများက နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ စတင်နိုင်ရန်အတွက် အတိုက်အခံများနှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပါရန် စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့သည့် အစဉ်အလာရှိသော စစ်တပ်က စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒပြသူများကို စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ နေအိမ်များကို ညသန်း ခေါင်ယံဝင်စီးနင်း၍ အဓိကကျသည့် သံဃာတော်များ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ခေါင်းဆောင်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။
နှိမ်နင်းမှုများကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ခြင်း
ထင်ရှားသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအဝင် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၁၂ ဦးကို စစ်အစိုးရက ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖမ်းဆီးပြီး ကတည်းက ယမန်နှစ် တနှစ်လုံး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို စစ်အစိုးရက ဆက်လက် ဖမ်းဆီးနေခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးဖမ်းဆီးမှုမှာ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွါးခဲ့ပြီး၊ တနှစ်ကျော်ကြာ ပြေးလွှားပုန်းအောင်း တိမ်းရှောင်နေခဲ့ရသော ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသူ မနီလာသိန်းကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလများ အတွင်း ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ဆန္ဒပြပွဲများကို ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကတည်းက ဤသို့ပြေးလွှား ရှောင်တိမ်းနေခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အလားတူ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အများအပြားအား ဖမ်းဆီးခြင်းကို စစ်အစိုးရက ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုမြင့်အေးကို မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကို စီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ထိုင်းအခြေစိုက် “နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီရေးအဖွဲ့ - မြန်မာပြည်” (AAPP-B) ၏ အဆိုအရ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းကို အကြမ်းဘက် မဖြိုခွဲခင်က မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ ရှိနေခဲ့သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဦးရေ ၁ ထောင်ကျော်မှာ ယခုအခါ ၂ဝဝဝ ကျော်အထိ တိုးလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ တလတည်းတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၃၉ ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ယခုအထိ ၂၁ ဦးကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ကာ ကျန်သူများကို အနည်းငယ်မျှ စစ်ကြောမေးမြန်းပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ဟု (AAPP-B) ၏ ထုတ်ပြန် ကြေငြာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
လှုပ်ရှားမှု အရိပ်အယောင် မတွေ့ရ
နောက်ထပ် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွါးမည်ကို စစ်အစိုးရက ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားဆီးကာကွယ် နှိမ်နင်းမှုများ ပြုလုပ်နေသည့် အတွက် လွန်ခဲ့သောနှစ် စက်တင်ဘာက ဆန္ဒပြသူများ အပြည့်အလျှံ ဖြစ်နေခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့၏ လမ်းမကြီးများသည် ယခုအခါ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်နေပြီး နောက်ထပ် လှုပ်ရှားမှုများ ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အရိပ်အယောင် မတွေ့ရကြောင်းဖြင့် ဒေသခံများက ပြောကြသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကျောင်းသားဟောင်းနှင့် ယခု မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လေ့လာသူဖြစ်သည့် ကိုအောင်သူငြိမ်းက အဓိကကျသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားလိုက်သည့်အတွက် ယခုနှစ်တွင် လူထုဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာဘွယ် မရှိဟု ပြောဆိုသွားသည်။
“လူတွေက အရမ်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြပြီ၊ နောက်ထပ် ဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ဘို့ အင်အားကို ရှိတော့ပုံမရဘူး” ဟု ကိုအောင်သူငြိမ်းက မေလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့ကို ဝင်ရောက်မွှေနှောက် တိုက်ခတ် သွားခဲ့သော ကြောက်မက်ဖွယ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အပျက်အစီးများကြောင့်လည်း ဤသို့ လမ်းပေါ်ထွက်၍ ဆန္ဒပြရန် မဖြစ်နိုင်တော့လောက်အောင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ် သွားခဲ့ကြသည်ဟု ထောက်ပြ ပြောဆိုသွားသည်။
မန္တလေးမြို့မှ မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံး-မယက (TPDC) အတွင်းရေးမှူးကလည်း အာဏာပိုင်များက စိုးရိမ်တကြီး ဖြစ်နေသော်လည်း မကြာမတင်ကာလတွင် လူထုလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အရိပ်အယောင် မသင်္ကာစရာဟူ၍ ဘာမျှမတွေ့ရဟု ဆိုသည်။
“ကျမမြင်သလောက်တော့ လူတွေက ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ရှုပ်နေကြတာ၊ မသင်္ကာစရာ ဘာမှမတွေ့ရပါဘူး၊ လူတွေမှာ ဒါတွေလုပ်ဘို့ အချိန်ကော၊ အားကော မရှိတော့ပါဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
အောက်ခြေလူထုနှင့် နီးစပ် အဆက်အသွယ်ရှိသော မန္တလေးမြို့မှ ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာတဦးက “ကျနော် မြင်တာတော့ လူတွေက ကိုယ့်စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ရေး၊ အလျင်မီရေးအတွက်ကို ရုန်းကန်နေကြရတာ” ဟု မှတ်ချက်ချ ပြောကြားသည်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Macquarie တက္ကသိုလ် စီးပွါးရေးဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရှောင်တားနဲလ် (Sean Turnell) က “စီးပွါးရေးအခြေအနေ သက်သက်ကိုသာ စူးစိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မနှစ်က လူတွေ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြတဲ့ အခြေအနေထက် ဒီနှစ်အခြေအနေက ပိုဆိုးနေတယ်၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေ ချက်ချင်းလက်ငင်းကို ဖြစ်လာနိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
သို့သော် ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်းကာလ နှိမ်နင်းခဲ့မှုများနှင့် နာဂစ် ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းအပြီး စစ်အစိုးရ၏ ရက်စက်မှုများကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်း လူထုအနေဖြင့် နောက်တကြိမ် အုံကြွမှုတရပ်ကို ထပ်မံပြုလုပ်ရန် ကြောက်ရွံ့နေပုံရသည်ဟုလည်း သတိပေး ပြောကြားသည်။
“လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအနေနဲ့ အုံကြွမှုတရပ်အတွက် ပေးဆပ်ရတာ သိပ်ကို တန်ဖိုးကြီးလွန်းတယ်ဆိုတာ လူတွေက ပိုသိလာနေကြပြီ” ဟု တားနဲလ် က ဖြည့်စွက်ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ၏ စီးပွါးရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စီးပွါးရေး ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားလာခဲ့ကြရသော မြန်မာလူထုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရဖြစ်စေ၊ စီးပွါးရေး အရဖြစ်စေ တစုံတရာသော လုံခြုံမှုတရပ်ကို ဆန္ဒရှိနေကြ သည်ဟု တားနဲလ် က ပြောသည်။
“လူထုက အသက်ရှင် ရပ်တည်နေနိုင်ရုံထက် နဲနဲပဲသာတဲ့ လွတ်လပ်မှုမျိုးကိုဘဲ ပထမလိုချင်နေကြတာ လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်” ဟု တားနဲလ်က ဆိုသည်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ လူထုက သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပုံမှန် အခြေအနေရှိတဲ့ နိုင်ငံတခုဖြစ်စေချင်တာ၊ အနာဂါတ်အတွက် တခုခု မျှော်လင့်လို့ရမဲ့ဟာမျိုး၊ မိဘတွေအနေနဲ့လည်း တခြားနိုင်ငံတွေက မိဘတွေလိုဘဲ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ဘဝမျိုး ကိုယ့်ကလေးတွေကို ရစေချင်တယ် ဟု တားနဲလ်က ပြောသည်။
“ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်တော့ ဗမာပြည် အခြေအနေက အဲဒါတွေနဲ့ပြောင်းပြန်ဘဲ။ ဗမာပြည်ဖြစ်နေတာ သိပ်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်၊ တကယ့်ကို ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်နေတာ” ဟု တားနဲလ် က ပြောသည်။
မြန်မာလူထုက သူတို့ဘဝ ရှင်သန်ရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ အစိုးရအနေနဲ့ မကူညီနိုင်ရင်တောင်မှ သူတို့ အခြေအနေ တစုံတရာ တိုးတက်လာအောင် လုပ်တာကို အတားအဆီး အနှောင့်အယှက် လုပ်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ နေစေချင်တယ် ဟု ခရစ်ယာန် တရားဟောဆရာက ပြောသည်။
“လူတွေမှာဖြစ်နေတာက အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှကို မပတ်သက်ချင်ကြတာ၊ တတ်နိုင်ရင် အစိုးရနဲ့ မပတ်သက်၊ မဆက်ဆံဘဲကို နေချင်ကြတာ” ဟု အဆိုပါ တရားဟောဆရာက ဖြည့်စွက်ပြောသည်။
လူထုရဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်တဲ့ဆန္ဒကို အစိုးရရဲ့ ဘယ်လိုဖိနှိပ်မှုမျိုးကမှ တားဆီးထားနိုင်မှာမဟုတ်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လူထု၏ ခုခံရေးတိုက်ပွဲများသည် ဆက်လက် ဖြစ်နေမည်သာ ဖြစ်သည်ဟု တားနဲလ်က ပြောသည်။
“ယခုအထိတော့ အစိုးရသည် နောက်ထပ်ကျယ်ပြန့်သော အုံကြွမှုမျိုးများ ဖြစ်မလာအောင် ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်” သို့သော်၊ လူထု၏ လွတ်လပ်လိုသော စိတ်ဆန္ဒကို လုံးလုံးလျားလျား ပျက်ပြားသွားစေရန် ပြုလုပ် မရနိုင်ခဲ့ပါ။